That's so good, right?: August 2010
'စာအုပ်ဆိုင်သွားမလို့ ဒယ်ဒီ.....သားမှာထားတဲ့ စာအုပ်ရောက်ပြီလား သွားကြည့်မလို့'
'အေးအေး.....အပြန် ဒယ်ဒီ့အတွက် Times မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်လောက် ဆွဲခဲ့'
စာအုပ်တွေနဲ့ ပျော်မွေ့ရတာ ကျွန်တော် အတော်နှစ်သက်ပါတယ်။ စာဖတ်ခြင်းက ကိုယ်မသိသေးသော အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက် အယူအဆအတွေးအမြင် ရှုထောင့်ပေါင်းစုံက အဖြေပေးနိုင်သည်ကိုး။ ကျောင်းမပြီးသေးခင်ကလည်း ကျောင်းစာလုပ်ပြီးရင် စာတစ်အုပ် မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်နှင့် အိမ်ရှိ အခန်းတစ်ခုခုမှာ ငြိမ်ပြီးနေတတ်ခဲ့တာ ကျွန်တော့်အကျင့်။ မာမီကတောင်ပြောတယ် ကျောင်းစာကိုသာ အဲဒီလောက် ဂရုစိုက်ရင် ပါရဂုဘွဲ့ရလောက်တယ်တဲ့လေ။
ငယ်ငယ်တုန်းက ဒယ်ဒီသွားသွားနေတတ်တဲ့ British Council က စာကြည့်တိုက်ကိုလိုက်လိုက်သွားပြီး နားလည်လွယ်တဲ့ ကာတွန်း လေးတွေ၊ ပုံပြင် လေးတွေ ဖတ်ရတယ်။ နောက်တော့် အိမ်မှာ ဒယ်ဒီကလည်း သင်ပေး၊ weekend တွေမှာ ဆရာတစ်ယောက်နဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အချိန်ပိုင်း လေ့လာ သင်ယူစေတော့ အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာ သူများထက်တော့ နှာတစ်ဖျားသာတယ်။ လူငယ်တွေ ခေတ်ရေစီးနဲ့ မျောနေကြချိန် ကျွန်တော်ကလည်း စာအုပ်တွေထဲ မျောနေတတ်တာကြောင့် အခုဘွဲ့ကြီးကြီးတစ်ခုယူပြီးချိန်ထိ ရည်းစားတောင်မရှိ။ အခုထိရင်မခုန် တတ်ဘူး အချစ်ကိစ္စမှာလေ။
အင်းဝစာအုပ်တိုက်တို့ အင်းယားလမ်းထဲက စာအုပ်ဆိုင်တို့ကတော့ မဆိုးပါဘူး စာအုပ်တွေဝယ်ရတာ။ ဒါပေမဲ့ အခုကျွန်တော်တွေ့ထား တဲ့ သံလွင်လမ်းထဲက Venus ဆိုင်လောက် ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ ကိုတော့ အပျင်းထူပြီးမသွားချင်တာကြောင့် ဆီပဲသွားသွားမွှေကာ ၀ယ်ဖြစ်နေရတာ။ Radom House ကနေမှာယူပေးနိုင်တယ်၊ စင်ကာပူ အခြေစိုက် စာအုပ်တိုက်များမှ တစ်ဆင့် အပတ်စဉ်၊ လစဉ် စာအုပ် များကို သီးသန့်မှာယူရောင်းချပေးနေတာလေ အဲဒီဆိုင်က။
Woo...အပြင်ထွက်မှာ အဲဒီလောက် ရာသီဥတုပူတာကို သတိပြုမိရတယ်။ ဒီလောက်များပြားလှတဲ့ လူအုပ်ကြီးထဲ လမ်းလျှောက်မိရတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်မိပါရဲ့။ အိမ်က ဦးမောင်ကို စောင့်နေရင်လည်း ပျင်းစရာ၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျတော့လည်း မမောင်းချင်တာ ဘာ သောက်ကျင့်မှန်းကို မသိဘူး။ ဘတ်စ်ကား မစီးဘူးလို့ တိုးပြီးစီး၊ သံလွင်လမ်းနားရောက်မှဆင်း နည်းတောင်နည်းသေးလို့ ဒယ်ဒီသိရင် ပြောခံရဦးတော့မယ်။ စာအုပ်ဆိုင်ထဲရောက်မှ အေးသွားတော့တယ် နေရထိုင်ရတာ။
ဒီ Venus ဆိုင်က အသေလန်းတယ်။ တစ်ပတ်နဲ့ တစ်ပတ် ဆိုင်ထဲ စာအုပ်ခင်းကျင်းပုံကအစ မတူဘူး။ စာအုပ်ကို ထိုင်ဖတ်ရင်း မြည်း လို့ရအောင် ချပေးထားတဲ့ ရောင်စုံခုံပုလေးတွေကလည်း ဒီဇိုင်းလှလှလေးတွေ။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်အမျိုးအစား ၀တ္ထုစာအုပ် တွေက လည်း အသစ် ရောက်တာ အများကြီးပါလား။အင်း....ဒါက Playboy မဂ္ဂဇင်းအသစ်....အာ ကျွန်တော်မရဲတရဲကောက်ကိုင်ကြည့်မလို့ လုပ်တုန်း မလှမ်း မကမ်းကောင်တာနားက ကောင်မလေးတစ်ယောက်က Vanity Fair ကိုရွေးနေရင်း စိုက်ကြည့်နေတာ သတိထားမိတာကြောင့် လှမ်းထား တဲ့လက်ကို တခြားစဉ်ဘက်ရွှေ့ရတယ်။ ဖတ်နေကျ စာရေးဆရာမရဲ့ဝတ္ထုတစ်အုပ်လောက်ကောက်ကိုင်ပြီး ငွေရှင်းကောင်တာဘက်ကို လှမ်းလာတော့ ငွေရှင်းနေသူတွေက ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ အများကြီး။ ခါတိုင်းလူတွေ ဒီလောက်မများပါဘူး။ ဒီနေ့ဘာအကြောင်းအရာ အသစ်အဆန်းများရှိပါလိမ့်။ အသက်ဝအောင်ရှူကာ တခြားစာအုပ်အမျိုးအစားစင်တွေဘက် လျှောက်ကြည့်ဖြစ်ရတယ်။ အိမ်ကလည်း ပြန်ချင်လာပြီ။
၀တ္ထုသစ်တွေထားတဲ့ကောင်တာဘက်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဟာမတွေ့။ Bestsellers? ဟွန်း....အရမ်း ထူတဲ့စာအုပ်တွေ၊ နိုင်ငံရေးစာအုပ်တွေဖြစ်နေတယ်။ အခုတလော လူတွေ အဲဒီလိုစာအုပ်တွေ အတော်ဖတ်ကြပါလား။ စိတ်တိုလာ ပြီး....မှာထားတဲ့ စာအုပ် ကိုမေးရအောင်ကလည်း ခါတိုင်းကောင်တာမှာ ထိုင်နေကျ အစ်ကိုကြီးကလည်း မရှိ။ အရောင်းဝန်ထမ်းလေး တွေကလည်း ရှေ့က၀ယ်သူ တွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်။
တော်ပြီကွာ.....BC ကိုပဲ သွားတော့မယ်။ ကိုင်ထားတဲ့စာအုပ်ကို နေရာတကျပြန်ထားလိုက်ပြီး ဆိုင်အပြင်ဘက်ထွက်ဖို့ဟန်ပြင်လိုက် တော့မှ ဆိုင်အနောက်ဘက်က တံခါးမကြီးပွင့်လာကာ ကောင်တာမှာ ထိုင်နေကြ အစ်ကိုကြီးထွက်လာကာ ကျွန်တော့်ဆီကိုလှမ်း လာတယ်။
'မင်း အိုကေရဲ့လား? မင်းမှာထားတဲ့စာအုပ်က နောက်shipment နဲ့မှပါလာမှာကွ။ တခြားစာအုပ်ကောင်းတာလေးတွေ ကိုယ် လက်ဆောင်ပေးပါ့မယ် ဖတ်ဖို့'
သူ့အပြုံးနဲ့ ပြောတဲ့စကားတွေကြောင့် ကျွန်တော့်မျက်နှာ ရဲကနဲဖြစ်ကာ ရှက်စိတ်ဝင်မိသေးတယ်။ တစ်ခါတလေ ကျွန်တော် စာအုပ် အများကြီးဝယ်ရင် စာအုပ်အသေးစားလေးတွေ လက်ဆောင်အဖြစ်တောင်းတတ်တာကိုး။ လက်ထဲမှာ သူကိုင်ထားတဲ့ စာအုပ်အချို့ကို ကျွန်တော့်ဘေးနားက စင်ပေါ်မှာသေသေသပ်သပ်တင်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်နားကို သူတိုးကပ်လာတာကြောင့် ကိုင်သင်းနံ့နဲ့ရော နေတဲ့ ရေမွှေးနံ့တစ်မျိုး ရရှိခံစားရတာ စိတ်ထဲမရိုးမရွဖြစ်လာပြီး ပေါင်ကြားက ညီဘွားက မဆီမဆိုင် မာတောင်လာရော။
'သတိရပြီ မင်းအကြိုက် စာရေးဆရာရဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် နောက်ဘက် စတိုခန်းထဲမှာ ကျန်နေသေးတယ်။ မင်းမဖတ်ရလောက်သေး ဘူး...လိုက်ယူမလားအစ်ကိုနဲ့'
ရပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်နား တိုးကပ်လာကာ ပခုံးပေါ်လက်တင်လိုက်ရင်း မျက်ဝန်းများနှင့် စိုက်ကြည့်ကာ စကားပြောတာ့ ကျွန်တော် ဘာ ကြောင့်မှန်းမသိ ရင်တွေခုန်လာတယ်။ အဆိပ်မိပြီ....သူ့မျက်ဝန်းများက တစ်ဆင့် အဆိပ်မှိုင်းမိခြင်း။
အရောင်းခန်းမထဲက ဖြတ်ပြီး အနောက်ဘက် စတိုခန်းအကြီးကြီးထဲ ခပ်သွက်သွက်ခြေလှမ်းများနောက် ကျွန်တော်လိုက်သွားတယ်။ နေရာတိုင်း နေရာတိုင်း စာအုပ်ပေါင်းများစွာ သေတ္တာကြီးများ၊ အစုအပုံထုပ်သိမ်းထားသည်များဖြင့် ပြည့်နေရော။ ကျွန်တော့်လက်ကို အသာဆွဲကိုင်ရင်း လူမြင်ကွင်းနဲ့ လှမ်းရာကို ဦးဆောင်သွားတယ်။ မဂ္ဂဇင်းတွေကို ပုံထပ်ထားရာ နည်းနည်းမှောင်တဲ့ ထောင့်တစ်နေရာဆီကို။
'အင်း.....ကိုယ်ရှာနေတဲ့ စာအုပ်က ဘယ်မှာပါလိမ့် ဒီနေရာများလား?' ကျွန်တော့်နားရွက်လေးကို နမ်းတယ်။ 'မဟုတ်ဘူး အောက်နားမှာ ထင်ရဲ့?' သူ့အနမ်းတွေဟာ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်တွေ၊ ဗိုက်သားတွေဆီ ရွေ့သွားတာ နောက်ဆုံး အစွမ်းကုန်မာထောင်ပြီး ဖောင်းနေတဲ့ ကျွန်တော့် ဘောင်းဘီရှေ့ သူမျက်နှာမူမိချိန်အထိပါ။
အခု အစ်ကိုတော့ တစ်ခုခုကို တွေ့ပြီထင်တယ်၊ ဒါအမှန်ဖြစ်မှာပါ သူကျွန်တော့် ဂျင်းဘောင်းဘီကြယ်သီးတွေကို တစ်လုံးခြင်းဖြုတ်တယ်၊ ပြီးတော့ ဇစ်ကိုအသာဆွဲချလိုက်ကာ တုတ်တုတ်ထွားထွား ကျွန်တော့်ညီဘွားကို အတန်ကြာကြည့်နေပြန်ရော။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ရော စိတ်အရမ်းလာတာကြောင့်ရော ၀တ်ထားတဲ့ briefs မှာ အစိုကွက်လေး ဖြစ်စပြုပြီ။ အဲဒါကို သူ့လျှာဖျားလေးဖြင့် ရစ်ကာ ရစ်ကာ ၀ိုက်တော့ ပိုပိုပြီး မာသထက်မာရတာပေါ့။
ပူနွေးနေတဲ့ သူ့အာခံတွင်းဟာ ကျွန်တော့် rocket ကိုကောင်းကောင်း ခံစားမှုရစေတယ်။ အရသာရှိစွာ..... ရင်ခုန်နှုန်းမြန်စွာ။ ကျွန်တော့် boxer ဘောင်းဘီကို ဖြည်းညင်းစွာ ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ အလျားပြည့်အနံပြည့် rocket ကြီးက ရှေ့တည့်တည့်ကို လမ်းညွှန်နေတာ။ သူ့တို့ထိမှု တွေဟာ ကျွန်တော့် စိတ်တွေကို အရူးအမူးဖြစ်စေသလိုပဲ။ ကျွန်တော် သူ့ပါးစပ်ထဲ -ီးကိုတစ်ချောင်းလုံးထည့် ခေါင်းကိုကိုင် အသွင်း အ ထုတ်မြန်မြန်လုပ်ကာ ပန်းထည့်ပစ်ချင်တာ ရွှေရည်တွေ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်အတွေးကြံဆချက်က အချည်းအနှီးဖြစ်ရပါတယ်။ သူက ကွမ်းသီးခေါင်း တလျှောက်ကို လျှာဖျားလေးနှင့် အားရပါးရ လျက်နေတာကိုး။ အရည်ကြည်စို့ထွက်နေတဲ့ အပေါက်ဝလေးကိုလည်း လျှာ ဖျားချွန်လေးဖြင့် ဖိဖိထိုးသေး။ သွေးကြောတွေ တင်းပြီးတောင်နေတဲ့ လိင်တံတလျှောက်ကို lollipop တစ် ချောင်းအားလျက်နေသလို မျိုး လှုပ်ရှားနေတာ။ ပူပူနွေးနွေး သူ့လျှာက ဖီလင်ပိုကောင်းအောင် ခံစားရစေပေမဲ့ ကျွန်တော် ဒီထက်ပိုရချင် နေသေးတယ်။
ဆံနွယ်ကွေးကွေးလေးတွေပါတဲ့ သူ့ခေါင်းကို ကျွန်တော်လက်နဲ့ထိုးဖွနေမိတာ ခဏတော့။ ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းသားလေးအသာဟပြီး ငြိမ် နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာထဲ ကျွန်တော့်ငပဲကို အသာထိုးထည့်လိုက်တယ်။ အစတုန်းက ခပ်ဖြေးဖြေး အသွင်းအထုတ်လုပ်တာပေါ့။ ရေဆာ သလို အာခေါင်ခြောက်သွေ့လာရင်း စိုစွတ်နေတဲ့ သူ့ပါးစပ်ထဲကို ထည့်နေမိတာ။အာခံတွင်းထဲ ထည့်ရတာ ပူနွေးနေတော့ ကျွန်တော့် စိတ်တွေ ပိုမို ထကြွသောင်းကျန်းကာ အသွင်းအထုတ်ကို မြန်သထက် ခပ်မြန်မြန်လုပ်မိတယ်။ သူ့ပါးစပ်ကို အသေပိတ်သလို နှစ်ကြိမ် တိုင်ဖြစ်မိပေမဲ့ ကျွန်တော် အဲဒါကို လျစ်လျူရှုကာ ကျွန်တော့်ကိစ္စကိုသာ ဆက်လုပ်ဖြစ်ပါရဲ့။ ဆွဲထုတ်လိုက်ဖို့သင့်ပြီ.....ရပ်တန့် လိုက်ဖို့ ကောင်းပြီ စိတ်ကတွေးမိပေမယ့် ခါးကတော့ လှုပ်ရှားလျက်ပါ။ ရှည်လျားလှတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို အပြင်ကို တစ်ချက်ဆွဲထုတ် လိုက်ကာ အပြင်မှာ ပန်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပေမယ့် သူ့လျှာတွေ နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ညှပ်ထားတာကြောင့် ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်စွာ သူ့ ပါးစပ်ထဲ အာခံတွင်းလည်မျိုတိုင် အရည်ပျစ်တွေဖြည့်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ 'အား....အ....အ' သူ အတံကိုအရင်းက ကိုင်ထားရင် ကွမ်းသီး ခေါင်းကို တပြွတ်ပြွတ် ဆက်စုပ်နေသေးတာ။
'ဘယ်လိုလည်း ဒီ customer service က အိုကေရဲ့လား?'
'အခု ကိုယ့်အလှည့် မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ နော်'
သူ့မျက်နှာက အရိပ်အယောင် တစ်ခုခုဖြတ်သွားသလိုပဲ။ ခပ်တင်းတင်းနဲ့ အကြည့်တွေက ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းထဲ စိုက်ကြည့်ပြီး စကား ပြောတာ ငြင်းဆန်ဖို့ မ၀ံ့ရဲတော့ပါ။ အသာငြိမ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုဆွဲဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကို မွတ်သိပ်စွာ၊ တမ်းတတပ်မက်စွာ နမ်းပါ တော့တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲယူပြီး သူ့ညီဘွားကို ကိုင်တွယ်စေပါရော။ မကိုင်တတ်ကိုင်တတ် ဘောင်းဘီပေါ် ကနေ အသာပွတ်သပ်ပေးနေတာ သူ့ဟာကြီးက တဖြည်းဖြည်း မာသထက်မာလာပါတယ်။ လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ကိုဖက်ထားရင်း ကျန်လက်တစ်ဖက်က သူ့ဘောင်းဘီ ဇစ်ကိုဖြုတ်ကာ ကြီးမားပြီး တုတ်ခိုင်လှတဲ့ -ီးကို အပြင်ဆွဲထုတ်ပြီး ကိုင်စေပါ၏။
သန်မာလှတဲ့ သူ့လက်အစုံနဲ့ ကျွန်တော့်ကို တဖက်လှည့်စေတယ်။ သူ့အသက်ရှူလေပူနွေးနွေးဟာ ကျွန်တော့်လည်တိုင်မှာ လာထိနေ ရော။ ကျွန်တော်သိရပြီပေါ့ သူကျွန်တော့်ကို -ိုးချင်တယ်ဆိုတာ။ သူ့ရဲ့တုတ်ခိုင်လှတဲ့ ရွှေနီငှက်ပျောသီးကြီးဟာ တင်ပါးများဆီ ဖိကပ်ထား တာကြောင့် ဘာမှန်းမသိ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲပြန်ပြီး ပူနွေးလာရပါတယ်။ လက်အစုံ ဖက်တွက်ထားတာ နည်းနည်းလျော့သွားတော့ ကျွန်တော် ရုန်းထွက်ကြည့်တာသူက ဆွဲချု့ပ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီကို ဖယ်ရှားပစ်ပါရော။ ကျွန်တော့်လည်တိုင်ကို ခပ်ပြင်းပြင်း နမ်းစုပ်ကာ ခရေ၀ကိုတော့ သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းနဲ့ သွေးတိုးစမ်းပါတော့တယ်။ အရည်ကြည်များစွာ ကွမ်းသီးခေါင်းမှာ ရွှဲနေတော့ ကျွန်တော့် ချယ်ရီဝကို ချောဆီဆွတ်သလို ဖြစ်ကာ အထွင်းထဲသွင်းဖို့ နည်းနည်းလွယ်သွားစေရော။ သူ....သူ ငြင်ငြင်သာသာ ဖိသွင်း ချိန်လေးက ခဏတာပါပဲ။
ကွမ်းသီးခေါင်းကို တစ်ချက်ထပ်ဖိသွင်းလိုက်လို့ ၀င်သွားချိန်မှာ သူခဏငြိမ်သက်နေပြီးနောက်မှာ တုတ်ခိုင်လှတဲ့ ပစ္စည်းကြီးကို ထိုးသိပ် ထည့်ပါတော့တယ်။ နာကျင်ခံစားရမှုဟာ ကျွန်တော်ရရှိဖို့ပြင်းထန်လွန်းလှပါတယ်ဗျ။ ကူကယ်ရာမဲ့ သဘောမျိုး စာအုပ်စင်တွေကို ဖမ်း ကိုင်ထားမိရတာ။ ရှပ်အင်္ကျီရော ချွတ်ထားတာကြောင့် သူရင်အုပ်တွေ သူ့ဗိုက်သားတွေရဲ့ နွေးထွေးမှုကို ထိတွေ့ခံစားရတာ မဆိုးဘူး။ ကြာကြာမသာယာလိုက်ရပါဘူး ကျပ်သိပ်လှတဲ့ ခရေ၀ထဲကနေ သူ့ပစ္စည်းကြီးကို အပြင်ဆွဲထုတ်လို့ ခံစားရတဲ့ နာကျင်မှုများကြောင့်။
ကျွန်တော် သက်သောင့်သက်သာ မရှိမှုကို သူသိနေပေမယ့် အဲဒါကို မဖော်ပြပါ။ ခရေတွင်းထဲကို နက်နိုင်သမျှ နက်အောင် တူးတယ်။ တစ်ချက် တစ်ချက် အသွင်းအထုတ်ပြုတိုင်း ပိုပိုရှည်ပြီး တုတ်လာသလိုပဲ။ မယုံနိုင်ဖွယ် လူကြီးပါလား။
'မင်း အစ်ကို့ကိုကိုင်ထားတာက ပိုကောင်းလိမ့်မယ်'
သိုင်းဖက်ထားတဲ့ သူ့လက်မောင်းတွေကို ကိုင်လိုက်ရပေမယ့် အဆက်မပြတ်ဆောင့်မှုကြောင့် စာအုပ်စင်ကို ပဲပြန်အားပြုရတယ် ကျွန်တော့်မှာ။ သူ့ဆောင့်သွင်းမှုကြောင့် အတံကြီးဟာ အတွင်းထဲ ပိုပြီးဝင်ဝင်သွားသလို ရွှေဥများဟာ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို ရိုက်ခတ် သံဟာလည်း အသံပိုကျယ်လာရတယ်။ သူ့ပါးစပ်က အော်ညည်းသံတွေ ပိုကျယ်လာတာအပြင် ဆောင့်ချက်တွေကလည်း ခရေတွင်းကို အနက်ရှိုင်းဆုံးဖြစ်စေပါတယ်။ နောက်ဆုံး အရှိန်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ဆောင့်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ခရေတွင်းထဲပူနွေးနွေး စမ်းချောင်းတစ်ခု စီးဆင်းပါရော။
storeroom တံခါးဝက အသံတစ်ခု...မေးသံတစ်သံပေါ်လာချိန်မှာ သန်မာတဲ့သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကို အသံမထွက် အောင် ပိတ်လိုက်သလို အခြားတစ်ဖက်မှလည်း ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို ချုပ်ထိန်းထားပါတယ်။ အဲဒီအနေအထားအတိုင်း နေရာလုံးဝ မရွေ့ အသံတစ်သံမထွက်အောင် ငြိမ်နေရတာ။ သူ့ရဲ့ပူနွေးတဲ့အရည်များဟာ ကျွန်တော့်ပေါင်တံ တလျှောက် စီးဆင်းသွားပါရော။ ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခန်းနား ရောက်လာသူ ပြန်ထွက်သွားချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့် storeroom ချစ်သူရဲ့ လက်မောင်းအစုံကို သတိထားပြန်ခံစားမိပါတယ်။ သူ့ငပဲခပ်တုတ်တုတ်ဟာလည်း ကြာရှည်မမာနိုင်ဘဲ တဖြည်းဖြည်း ကျွတ်ထွက်သွားပါပြီ။
သန်မာ ကျစ်လစ်တဲ့ လက်မောင်းတွေကြား ရောက်နေရခြင်း၊ လည်ဂုတ်နားက ထိနေတဲ့ သူ့ရင်အုပ်မွှေးနုနုများဟာ လာရောက်ပွတ် သပ်နေခြင်းတို့ကြောင့် ကျွန်တော် သူ့ဘက်လှည့်ပြီး မျက်နှာမူလိုက်ချိန်မှာ အပြုံးခပ်ကြီးကြီး တစ်ခု မျက်နှာပေါ်ပေါ်ထွက်လာစေရဲ့။ ကျွန်တော် turn-on နောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်မိလာတာကို သူမြင်တွေ့သွားခြင်းကြောင့်လေ။
ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်အ၀တ်အစားတွေအားလုံးသိမ်းဆည်းပြီးနောက် သူက ကျွန်တော့်လက်ကို ဆွဲကိုင်ကာ မှောင်နေတဲ့ စတိုခန်းထဲက နောက်တစ်ကြိမ် ရုံးခန်းတစ်ခုနဲ့ဆက်ထားတဲ့ တံခါးကိုဖွင့် ခေါ်ဆောင်သွားကာ အထဲကိုဝင် တံခါးကိုလော့ခ်ျလုပ်လိုက်ပါရော။
'မင်းလေးကို ဒီနေရာ တန်းခေါ်လာလို့ရပေမဲ့ storeroom ထဲမှာ အရင်လုပ်ချင်တတ်ခဲ့တာ အမြဲတမ်း'
တုန်လှုပ်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်၊ ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ စိတ်နဲ့ မ၀ံ့မရဲဖြစ်နေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် အခုတစ်ခါတော့ နည်းနည်းဝံ့ရဲလာသလိုပါ။ ရုံးခန်းထဲ မှာ ဘယ်သူမှမရှိ လုံခြုံတဲ့နေရာဖြစ်နေခြင်းကလည်း ပါမယ်ထင်ပါတယ်။ မလှုပ်မရှားရပ်နေတဲ့ ကျွန်တော်ရှိရာကို သူလှမ်းလာပြီး နှုတ်ခမ်း ထူထူများဖြင့် နှုတ်ခမ်းပါးကို နမ်းစုပ်ပြန်ပါရော။ ပြီးတော့ ရင်ဘတ်အစုံက နို့သီးခေါင်းလေးတွေဆီ ရွေ့လျားကာ လျှာနဲ့ကလိပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းအောက်ပိုင်းဆီကို ရွေ့လျားလာတဲ့ နှုတ်ခမ်းများဟာ ချက်ပေါက်ဆီအရောက် ခဏငြိမ်သက်သွားပြီးနောက် လျှာလေးထုတ် ကာ မွှေပါတယ် ထမနဲ။ ပေါင်ခြံကြားက ညီဘွားကလည်း ပြန်မတ်လာကာ ပူနွေးတဲ့လျှာတွေ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ငံ့လင့်စောင့်ဆိုင်းနေပြီ ပေါ့။ သိပ်ကြာကြာ မစောင့်လိုက်ရပါဘူး ခဏနေတော့ နှုတ်ခမ်းအစုံဟာ မတ်ထောင်နေတဲ့ ငပဲတလျှောက် ဖွဖွငြင်သာ အနမ်းပေးထိတွေ့ နေပြီး ကွမ်းသီးခေါင်းကို တရှိုက်မက်မက် နမ်းရှုံ့ကာ လျှာနဲ့ရစ်ဝိုက်ရင်း စုပ်မျိုလိုက်ပါတော့တယ်။
အတန်ကြာ သူအလုပ်လုပ်နေတာ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်ခါလာရပါတယ်။ အစွမ်းကုန်ခံစားမှုတွေ ဖြစ်တည်လာတာကို သူရိပ်မိသွားပြီထင်ရဲ့။ ကျွန်တော် climax မဖြစ်ခင်လေးမှာ သူ့ပါးစပ်ထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်ပါရော။
'မင်းဖာသာ ပြီးအောင် ခံစားကြည့်'
'မင်းလေး climax ဖြစ်သွားပုံကို ကိုယ်ကြည့်ချင်လို့'
သူပြောသမျှ လိုက်နာကာ ဆိုဖာပေါ်တက်ပြီးလှဲလိုက်ပါတယ်။ ညင်သာပြီး နုညံ့တဲ့အသံဟာ လိုက်နာဖို့ကောင်းတဲ့ အမိန့်သံပါပဲ။ ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။
ကျွန်တော့်ငပဲကို အသာလက်တစ်ဖက်နဲ့ကိုင်ပြီး ခပ်ဖြေးဖြေးစထုပါတယ်။ တစ်ချောင်းလုံးဟာ သူ့အာခံတွင်းက ပေးခဲ့တဲ့ နွေးထွေးစိုစွတ် မှုကိုခံစားရဆဲပါ။ တစ်ချက် တစ်ချက် လက်ကစားတိုင်း ချောမွတ်အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျန်တဲ့ လက်တက်ဖက်ဖြင့် ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို ပွတ်သပ်မိ ဖျစ်ညှစ်မိပါရဲ့။ ကျွန်တော့်လှုပ်ရှားမှုများကို စူးစိုက်ကြည့်နေရင်း တပ်မက်မှုတွေပြင်းထန်လာပုံပေါ်ပါတယ်။ သူ့မျက်လုံးတွေ အရောင်တောက်လာနေချိန်မှာ ကျွန်တော့်လက်ဟာ ခရေ၀ဆီ ရွှေ့လိုက်ရင်း လက်ချောင်းတစ်ချောင်းကို သွင်းလိုက်တာ လက်ကျန် သူ့ juices များကြောင့်ချောမွေ့ရော။ လက်တစ်ဖက်က ခပ်သွက်သွက်ကစားသလို ကျန်လက်တစ်ဖက်ကလည်း ခရေ၀ထဲ နက်သထက်နက် စေပါတယ်။ သူအခန်းထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာတောင် မေ့သွားပါရဲ့။ ကိုယ့်ကမ္ဘာ ထဲကိုယ်မျောနေရင်း ပန်းထုတ်ဖို့တောင် အဆင်သင့်။
ဖြန်းကနဲ တင်ပါးကို ရိုက်လိုက်မှုကြောင့် သတိပြန်လည်လာစဉ်မှာတော့ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေကို ခရေ၀မှ ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရှည်လျားလှတဲ့ သူ့လျှာကြီးဟာ -ီးတစ်ချောင်းလို အလုပ်လုပ်ပါရော ခရေ၀မှာ။ အ၀လေးမှာ ကလိနေရာကနေ အတွင်းပိုင်းထဲ ခပ်နက်နက် အသွင်းအထုတ်လုပ်ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်တော့ဘူး အမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်ဆီရောက်သွားပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်၊ ဗိုက်သားနှင့် မျက်နှာမှာတောင် အရည်ပျစ်တွေရောက်ကရော။ စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါ အတွင်းမှ တစ်စက် မကျန်တဲ့အထိ ပန်းထုတ်မိပါပြီ။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တစ်ရက်ထဲမှာ နှစ်ကြိမ်ပြီးဖို့ဆိုတာ ခဲယဉ်းပါတယ်။ လုပ်လည်းမလုပ်ပါဘူး။ ဒီလိုဖြစ်မိခဲ့မယ်လို့တောင် မထင်ပါဘူး။ ချစ်ချစ်ကြီးက ကျွန်တော့်နားလှမ်းလာကာ ပါးပြင်တလျှောက်နှင့် နှုတ်ခမ်းတွေကို အနမ်းရှည်ပေးပြန်တယ်။ မာထောင်နေတဲ့သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်လက်တွေနှင့် ဆွဲကိုင်လိုက်မိရာ အကြောတွေ တဆတ်ဆတ်ခုန်နေပုံပေါက်ရင် သူလည်းပဲ ရောက်ခါနီးပြီဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ မာနေတဲ့ အသားချောင်းရဲ့ ပူနွေးနေမှုကို ကိုင်ထားရင်း ကျွန်တော်ရင်ခုန်တယ်။
'Fuck me.' သူ့ကို ကျွန်တော် အသနားခံလိုက်သည်။
မျက်နှာမှာ အပြုံးခပ်ကြီးကြီးပေါ်လာကာ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်ကို ခွရပ်လိုက်ကာ မာထောင်နေတဲ့ ငပဲကို မျက်နှာနားတိုးကပ်လိုက်ပါတယ်။
ပြောစကားအတိုင်းပါးစပ်ကို ကျယ်ကျယ်ဖွင့်လိုက်တော့ သူ့ပစ္စည်း တုတ်တုတ်ကြီးကို လည်မျိုထဲရောက်တဲ့အထိသွင်းလိုက်ပါရော။
ကျွန်တော့်မျက်နှာနား ခွရပ်လိုက်ရင်း သူ့ပစ္စည်းကို အသွင်းအထုတ်လုပ်ပါပြီ။ အသက်ရှူရခက်ခဲသလိုဖြစ်ပေမဲ့ သူဒါကို ဂရုမစိုက် ခပ် သွက်သွက်သာ လှုပ်ရှားနေပါရော။ ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်ချက်တွေကြောင့် သူ့ရွှေဥတွေဟာ ကျွန်တော့်မေးစေ့ကို ရိုက်ခတ်နေသလို အသက်ရှူသံဟာလည်း မြန်လာပါတယ်။ ခဏအကြာမှာတော့ သူ့ခန္ဓာကိုယ် ဆတ်ကနဲဖြစ်သွားကာ ဆောင့်သွင်းချက်တွေ နှေးကွေး လာရင်း ကျယ်လောင်တဲ့ အော်ညည်းသံတစ်ခုပြုလိုက်တဲ့ခဏ ငံကျိကျိ အရည်တွေပန်းထည့်ပါတော့တယ်။ ငြိမ်သက်သွားတဲ့ သူ့အရှိန် ကြောင့် အသက်ရှူမိတဲ့ ကျွန်တော် သူ့အရည်တွေ မျိုချမိပါပြီ။
အရည်တွေ တစ်စက်မကျန်တဲ့အထိ သိမ်းဆည်းပေးပြီးတဲ့အခါမှာ သူ့ပစ္စည်းကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲက ဆွဲထုတ်သွားပါတယ်။ အတန်ကြာ မတ်တပ်ရပ်နေပြီးနောက် ကျွန်တော့်နံဘေးဆိုဖာပေါ်ကို သူလှဲလျောင်းလိုက်ပါတယ်။ ချွေးစေးအချို့ထွက်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ကျွန်တော့် ဆီ နီးကပ်လာသလို သန်မာတဲ့ လက်မောင်းများဟာလည်း ကျွန်တော့်ကို ဖက်တွယ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးသား အတူတကွ ဆိုဖာပေါ်မှာ လှဲ လျောင်းနေကြခြင်း။
'အစ်ကို ညီ့ကိုဝန်ခံစရာ တစ်ခုရှိတယ်။ ညီကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စာအုပ် လက်ကျန် တကယ်တော့ မရှိဘူးကွ ကုန်သွားပြီ'
အဖုအထစ်မရှိတော့သော လေပြေထိုးသံနှင့် ကျွန်တော့်အနားကိုကပ်ကာ တိုးတိုးလေးပြောတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့မျက်နှာ လေးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အသာညှပ်ယူ နှုတ်ခမ်းများကို အညင်သာဆုံးနမ်းကာ မျက်ဝန်းများကို စိုက်ကြည့်လိုက်ရင်း စကားတစ်ခွန်းဆို လိုက်တယ်။
Alex Aung (30-8-2010)
Posted by Alex Aung at 7:07 PM No comments:
အချစ်ဆိုတာ လူနှစ်ယောက်အကြားမှာ အသုံးချစကားသက်သက်အဖြစ်ပါပဲ။ ကိုယ့်ချစ်သူဆိုသောသူက ကိုယ်မသိတဲ့ တစ်ခြားနယ်ပယ် မှာ တစ်ခြားသော သူ့ရဲ့ အသဲအသက်ဖြစ်နေတတ်တာ မြင်နေကြားနေ ခံစားခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ယခင် အသက်ငယ်စဉ် ဆယ်ကျော်သက်.... အဲလေ နှစ်ဆယ်ကျော်သက်ထိ အချစ်ကို ယုံကြည်ရူးသွပ်ခဲ့တာ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ပါ။ အခုကော ဆိုရင်လား.....လေပွေတစ်ခုထဲက သစ်ရွက်ငယ်ဖြစ်နေပါပြီ။
ဆောင်းရာသီအတွင်း နေ့လည်ခင်းတစ်ခုမှာ မန်ဘာဝင်ထားတဲ့ ဟိုတယ်ရဲ့ လာနေကျ gym ကနေ အချိန်စေ့တာကြောင့် ကျွန်တော်ပြန် လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လှေကားထစ်ကနေ ခပ်သွက်သွက်လေးဆင်းလာရင်း sauna ရှိတဲ့ဧရိယာဘက်ကိုအရောက်မှာတော့ မဆီမဆိုင် စိတ် တွေဟာပူနွေးလာပြီး ကိုတောင့်တစိတ်တွေ ဖြစ်မိလာပါရော။ ဟူး.....ကိုယ်ခန္ဓာလည်း တောင့်တင်းသန်မာ သက်လုံလည်းကောင်းစေတဲ့ ဒီအားကစားကို ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ အခုလည်း ခပ်ပျော့ပျော့ ဘောင်းဘီရယ် ချွေးအနည်းငယ်စိုနေတဲ့ အားကစားရှပ်ရယ်၊ ကင်းပတ်ဖိနပ်ရယ် ၀တ်ဆင်ပြီး ကားပါကင်ဆီပြန်လာတာ။
ဟိုတယ် Gym ကနေ sauna ဘက်ရောက်တဲ့အထိ စင်္ကြံလမ်းအရှည်ကြီးကိုလျှောက်ခဲ့ရသလို လှေကားထစ်ထောင့်ချိုးတွေလည်း ဖြတ် သန်းရတာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆လလောက်တုန်းက sauna ရဲ့ locker room ထဲမှာ အမှတ်မထင်ဆုံခဲ့ရသော လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း တစ်ယောက် ကို သတိရမိပါရဲ့။ ကျွန်တော် gym ကိုလာတိုင်း အဲဒီလူနဲ့ မျက်လုံးခြင်းအကြည့်ဆုံဖြစ်သလို ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မျက်ဝန်း တွေက တစ်ခုခုကို အထာပေးနေသလိုမျိုးပါ။ ဘော်ဒီခပ်ထွားထွား တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင် နှင့် မျက်မှန်ထူထူဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူနဲ့ ဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ ကျွန်တော် စဉ်းတောင်မစဉ်းစားမိပါဘူး။
Sunday မနက်ပိုင်းတစ်ခုမှာ သူအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးလှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးနောက် ဘက်စစ်ဆေးဖို့ဝင်အလာ ကျွန်တော် အ၀တ်လဲ နေ တာကိုမြင်တော့ မျက်လုံးခြင်းဆုံအောင် တစ်ချက်ကြည့်ကာ အခန်းထဲက ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ခပ်သွက်သွက် သူ့ နောက်ကလိုက်သွားဖြစ်တာမှာ ရှည်လျားလှတဲ့ စင်္ကြံလမ်းတလျှောက် လှည့်ကြည့် လှည့်ကြည့် သွားနေတဲ့သူ့နောက်ကိုလေ။ နောက် ဆုံး လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေ နားနေတဲ့ အခန်းငယ်လေးထဲ သူဝင်သွားမှ ဟထားတဲ့ တံခါးကို အသာတွန်းပြီး ကျွန်တော်လည်း အခန်းထဲ ၀င်လိုက်ကာ တံခါးကိုလော့ခ် ချလိုက်ပါရဲ့။ ၀န်ထမ်းဝတ်စုံဘောင်းဘီရဲ့ ဇစ်ကိုဆွဲဖွင့်ပြတော့ ကျွန်တော်လည်း အလိုက်သိ သူ့ရှေ့မှာ ဒူး ထောက်လိုက်ရင်း အရသာရှိလှတဲ့ အသင့်မာတောင်နေတဲ့ သီးမွှေးငှက်ပျောသီးကြီးကို မျိုချဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသား အကြိမ် များစွာတွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ လအနည်းငယ်ကြာတော့ သူ့ကိုကျွန်တော်မတွေ့မမြင်ရတော့ပါဘူး။ တခြားအဆောက်အအုံဘက် တာဝန်ကျသွားပြီထင်ပါတယ်။
လူဆိုတာ ခက်သားလား ကားပေါ်ရောက်လို့ အိမ်ပြန်တော့ နောက်တစ်ယောက်....ပက်သက်ဖူးတဲ့ နောက်တစ်ယောက်အကြောင်း စိတ်ထဲ ရောက်လာပြန်ရော။ သူ့နာမည်က 'ကျော်ကျော်' လက်ထပ်ပြီးသူတစ်ယောက်။ ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်က တစ်ဆင့် လ အနည်းငယ်ကြာခင်မင်ခဲ့ကြပြီး ၊ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် ပုံမှန်တွေ့ဖြစ်ကြတာ အလွန်ရင်ခုန်တပ်မက်ဖွယ် ကောင်းလှပါရဲ့။ သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှတ်အရဆုံးကတော့ ကျွမ်းကျင်လှတဲ့ သူ့အပြုအစုနဲ့ အလိုက်သိတဲ့ သူ့ဟန်အမူအရာများဖြစ်ပါတယ်။ စနေနေ့ တစ်ရက် ကျွန်တော်တို့ အပြင်မှာတွေ့ဖြစ်ကြပြီး gym ကို ကျွန်တော့် ဧည့်သည်အနေနဲ့ ခေါ်သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အတူတူ အလေးမ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ကြတာမို့ တမင်သက်သက် ကိုင်တွယ်ထိတွေ့သလို အချင်းချင်း ထိတွေ့မိကြပါရဲ့။ ကျွန်တော့်တိုက်ခန်းကို မသွားမီ သူ့ကို sauna ဆီခေါ်သွားတော့ နှစ်ဦးသားသဘောတကျ ထိုင်ရင်းစကားပြောခြစ်ကြတယ်။ သုံးလေး blockလောက်ဝေးတဲ့ ကျွန်တော့် တိုက်ခန်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ကျေနပ်နှစ်သက်မှုအရှိဆုံး လိင်ဆက်ဆံပတ်သက်မှု ရရှိခဲ့ကြတာ နှစ်ဦးသား။ သူက ချွေးရွှဲ နေတဲ့ ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းလေးကို လျှာနဲ့ဆော့ကစားရတာကိုကြိုက်တယ်။ အဲဒီ့လျှာကျွေးခံရရင် ကျွန်တော့်စိတ်တွေ မြောက်မြောက် သွားသလိုပါပဲ ခံစားရတာ။ သူ့ကိုယ်ပိုင်ချွေးနံ့ အချို့ရနေတဲ့ တီရှပ်အနက်တစ်ထည်ကို ကျွန်တော့်အားပေးတော့ ရင်ခုန်စွာဝတ်ဆင်ဖြစ် ရင်း ရင်ထဲ မရိုးမရွဖြစ်မိရဲ့။ ဟိုတယ် စင်္ကြံလမ်းအရှည်ကြီးကိုလျှောက်ဖြစ်တိုင်း နှစ်ဦးသား အတူ sauna ၀င်ထိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာကို မမေ့နိုင် ပါဘူး။ အခုအချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသား နားလည်စွာလမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်။ သူ့မိသားစုအတွက် အချိန်ပေးဖို့ ဇနီးမယားအ တွက် ကိုယ်ချင်းစာပေးရမယ် မဟုတ်လား။ သူ့ရွှေနီငှက်ပျောသီးရယ်၊ ခရေပွင့်တွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက် လက်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်က မေ့နေနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ညီဘွားကတော့ မမေ့နိုင်ခဲ့ပဲ သတိရနေသေးပါ၏။
နောက်တနေ့ နေ့လည်ခင်းမှာ gym က locker room ထဲပစ္စည်းထုပ်တွေယူရင်း စိတ်အာရုံထဲ အရမ်းငြိလာတဲ့ အာသီသဖြစ်လာပြန်ပါ ရော။ အဲဒါက အလုပ်ကိစ္စလည်း မဟုတ် ကော်ဖီဆိုင်ကိုရွေ့ဖို့လည်းမဟုတ်ပါ။ လိင်ကိစ္စ ဟုတ်တယ် လိင်ကိစ္စကို တစ်ယောက်ယောက် နှင့် ပတ်သက်ဖြစ်ဖို့။ အ၀တ်အိတ်လေး အသာဆွဲ sauna ရဲ့တံခါးကိုဆွဲဖွင့်ကာ ၀င်သွားတော့ ဘဲနှစ်ပွေ နည်းနည်းမြင့်တဲ့ ခုံအဆင့်မှာ ထိုင်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ ဘယ်ဘက်က လူက လေးဆယ်ဝန်းကျင် သိပ်မထူးခြားတဲ့ပုံစံနဲ့။ သူ့ကိုနောက်တစ်ချက်ပြန်မကြည့်ခင် ညာဘက်ကို မျက်စိရွေ့ဖြစ်တော့ အလှနတ်ဘုရားတစ်ပွေ ထိုင်နေတာကိုတွေ့ရပါပြီ။ အ၀တ်လဲလှယ်ပြီးနောက် သူတို့နှစ်ဦးကြား အကွာ အဝေးအနေအထားကို ကြည့်လိုက်တော့ လူတစ်ယောက်ဝင်ထိုင်လောက်အောင် မရ။ ဒါကြောင့် သူတို့နှစ်ဦးကိုမြင်နိုင်တဲ့ ညာဘက် ထောင့် ပထမအဆင့်မှာ ကျွန်တော်ထိုင်လိုက်တယ်။ အသက်နည်းနည်းကြီးတဲ့ ဘဲက အရပ်အတော်မြင်တယ်ဗျ။ ခန္ဓာကိုယ်ကပြေပြေ ပြစ်ပြစ်နဲ့ ကြွက်သားနည်းနည်းရှိတယ်။ tattoo သုံးခု သူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ထိုးထားတာကို တွေ့ရပါရဲ့ ခါးအစပ်မှာ နှစ်ခု ဘယ်ဘက်ရင်အုပ် နားမှာတစ်ခု။ အဲဒီလူမျက်ဝန်းတွေကတော့ ကျွန်တော့်ကို အထာပေးတဲ့အနေနဲ့ ကြည့်ကြည့်နေတာကို မြင်ပေမဲ့ မသိဟန်ဆောင်ရင်း ကောင်ငယ်လေးကိုသာ ဘာလုပ်နေလည်းကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့လက်ချောင်းတွေဟာ ရင်အုပ်တွေဆီ ပွတ်သပ်လိုက် ဗိုက်သားတွေကို မသိမသာပွတ်သပ်လိုက်.....ပြီးတော့ နောက်ကိုအသာမှီလိုက်ကာ လက်ကို သူ့ပေါင်တံတွေကြား အနားပေးလိုက်ပါသေး။ သူဘာလုပ် နေလည်း ကျွန်တော်မမြင်ရဘူး ရှင်းရှင်း။ သူ့လက်တွေကို အဲဒီနေရာမှာထားပြီး အနားယူတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ နောက်ကိုမှီပြီး ငြိမ် သက်နေတဲ့ သူ ခဏကြာတော့ မျက်လုံးတွေ ပြန်ပွင့်လာကာ ကျွန်တော့်ကို နောက်တစ်ကြိမ်ရှိုးတယ်။ ရေနဲ့အပူချိန်ကို စမ်းသပ်ရင်း လက်မောင်းတွေ၊ ရင်အုပ်တွေ၊ပေါင်တံတွေ ဖြည်းဖြည်းပွတ်သပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ဆီ အာရုံစိုက်တယ်လေ။ ပူနွေးစိုစွတ်နေတဲ့ အာရုံတွေနှင့်အချိန်နည်းနည်း ကြာလာတော့ ကျွန်တော်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ jockstrap ဟာတဖြည်းဖြည်းဖောင်းကြွလာပါပြီ။ နာရီဝက်နီး ပါးကြာလာပြီးနောက် ဘယ်ဘက်က ဘိုးတော် ဖန်လို့မရမှန်းသိကာ ထိုင်နေရာမှထ ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။ မဆိုင်းမတွ ကျွန်တော် အဲဒီ့ဘိုးတော်ရဲ့ နေရာကို အပိုင်စီးလိုက်တယ်။ ကောင်ချောလေးဆီ မျက်နှာမူရင်း ထိုင်မိတော့ သူကလည်းမခေ လက်ကို ဆန့်ထုတ်ရင်း အပြုံးကြီးပေးရင်း ကျွန်တော့်ကိုနှုတ်ဆက်ပါ့။
သူ့လက်ကို ငြင်ငြင်သာသာ လှုပ်ကိုင်ရင်း မျက်ဝန်းတွေကို စိုက်ကြည့်လိုက်ကာ 'အစ်ကိုက ဇော်ရဲထွန်း'
သူ့လက်တွေကို မဖြုတ်ချင် မဖယ်ချင် ခပ်နှေးနှေး ပြန်နှုတ်လိုက်ရင်း ကျွန်တော့်ကိုမေးတယ်ဗျ။ 'အစ်ကိုက gym က နည်းပြလားဗျ?'
'ဒီက Gym မှာ လာပြီး လေ့ကျင့်ကစားတဲ့ အသင်းဝင်သက်သက်ပဲ'
ခဏနေတော့ သူနံရံကို မှီလိုက်ပြီး ခါးမှာပတ်ထားတဲ့ တံဘက်ကို ဖယ်လိုက်တာ ကျွန်တော့်မျက်စိရှေ့ ၆လက်မထက် မနည်းသော မာ တောင်နေတဲ့ အမြှောက်ကြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားကနေ ပေါ်လာပါရော။ 'Holy Fuck!' ကျွန်တော့်မှာ မလုံမလဲနဲ့ အ၀င်ဝက glass တံခါး ချပ်ကို လှည့် ကြည့်ဖြစ်ရသေးတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်များ ကြည့်နေနိုင်မလားလို့လေ။ သူကတော့ ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက် သူ့ ငပဲခပ် ထွားထွားကို လက်နှင့်ခပ်တင်းတင်း ကိုင်ကာ ဆော့ကစားနေရော။
'မင်းနို့သီးခေါင်းလေးကို ကလိချင်တယ်၊ ပြီးတော့ မင်းတင်ပါးလေးတွေနဲ့အတူ -ီးကို ကိုင်ချင်တယ်ကွာ'
ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို စိုက်ကြည့်ရင်း အပြုံးတွေဖြာကာ တောင့်တတဲ့ ဖိတ်ခေါ်တဲ့အမူအရာများ အရိပ်အယောင်ပေါ်လာပါတယ်။ မှန်တံခါးချပ်ကနေ ဘယ်သူဝင်လာမလည်း ဂရုမစိုက်နိုင်စွာ သူ့နှုတ်ခမ်းပြည့်ပြည့်လေးတွေရှိရာဆီ ငုံ့ကိုင်းပြီး နမ်းလိုက်ပါပြီ။ အစပိုင်း တော့ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေ အသာစုပ်နမ်းနေပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်း ပြင်းပြတပ်မက်စွာ အနမ်းမုန်တိုင်းထန်ကြပါရော။ လျှာဖျားလေးတွေ သူ့အာခံတွင်းထဲသွင်းလိုက်တော့ သူကလည်း ပြန်လည်ပြီး တုန့်ပြန်လိုက်ပါ၏။
သဘာဝအလျောက် သူသိသလားမသိ? ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်းနဲ့ စုပ်ယူပြီး လျှာနဲ့ကလိတယ်။ သူ့လက် ချောင်းထိပ်လေးတွေကလည်း ကျွန်တော့်ပေါင်တံတွေကို ကုတ်ခြစ်ပေးပြန်တော့ ရင်တွေ အရမ်းခုန်လာကာ ညီဘွားက အရမ်းကို မာတောင်လာရော။ ကျွန်တော့်မှာ ၀င်ပေါက်ဝဆီ အခြေအနေကြည့်ရင်းတွေးမိတာက ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုလုပ်နေလို့ မဖြစ်ဘူးဆို တာပါပဲ။ ဒီလိုစနေနေ့လည်ခင်းမျိုးမှာ လူအချို့အနားယူတဲ့အနေနဲ့ လာတတ်ကြတာဆိုတော့။ ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်လေးက အရမ်း ဟော့တ်တယ် ကျွမ်းကျင်လိမ္မာလွန်းတယ် လိင်ကိစ္စမှာ။ ကျွန်တော် မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ရင်း ခါးမှ တဘက်ကို ဖယ် jockstrap ကို ချွတ်လိုက်တော့ မာတောင်နေတဲ့ ညီဘွားက ရမ်းခါရင်း ပေါ်ထွက်လာပါပြီ။
'ညီက အိုကေလို့လား ဒီဆိုဒ်မျိုးနဲ့'
နှုတ်ခမ်းလေးတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်နေတာကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်ပြန်လည်နမ်းဖြစ်ရပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့နှုတ်ခမ်းသားတွေ အတန်ကြာ ထိကပ်နေရင်းခွာလိုက်စဉ် အ၀င်တံခါးကိုကြည့်ရသေးတယ် လူလာမလာ။ သူလေးကတော့ ဘာမှ ဂရုမစိုက်ဟန်ဖြင့် ကျွန်တော့်ငပဲကို ပူနွေးနွေး အာခံတွင်းထဲထည့်ငုံလိုက်ပါရော။ အလွန်ကျွမ်းကျင်လှပါလား....ထိပ်အရေပြားကို ဆွဲပြီးစုပ်မျိုနေသေး....ပြီးမှ ကွမ်းသီး ခေါင်း ....ထိုမှတစ်ဆင့် တစ်ချောင်းလုံးကို အာခံတွင်းထဲ ထည့်လိုက်တာ။ ကျွန်တော်သိတယ် ကျွန်တော့်ဆွဲဆောင်မှုအောက် သေချာပေါက် လိုက်လာပြီဆိုတာလေ။
'ဒါဆို....အစ်ကိုက ဒီနေရာနဲ့ မျက်စောင်းထိုက တိုက်ခန်းမှာ နေတာ အတူလိုက်ခဲ့မလား?'
ကောင်လေးစပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို တပ်မက်စွာလည်းနမ်းသေး လက်ကလည်း ငပဲကို မလွှတ်။ 'အစ်ကို အ၀တ်လဲခန်းမှာ စောင့်နေမယ် မင်းလိုက်လာခဲ့နော်'
'မင်းကိုယ့်အခန်းရောက်ရင် ချွေးထွက်ရမယ့် ကိစ္စလေးတွေ ရှိသေးတယ်လေ...'
သူမတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကာ သူ့အောက်ပိုင်းကို တဘက်နှင့် ပတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့တုတ်တံက သိသာစွာထောင်နေရော။ အတူ တူနှစ်ယောက်သား sauna ကထွက်လာလိုက်ကြတယ်။ အံအားသင့်ဖွယ်ရာပါပဲ အ၀တ်လဲခန်းထဲတစ်ယောက်မှ မရှိဘူး။ အားကစား ဘောင်းဘီ တိုကို သူကောက်စွပ်ပေမဲ့ သူ့ရဲ့ငထွားကြီးက ဖုံးဖိမရပေါ်လွင်နေရော။ သူ့ဖြစ်နေတာကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်ကလည်း turn-on ဖြစ် နှစ်ဦးသား ဟာသကိုဖြစ်လို့ ရယ်မောမိကြပါသေးတယ်။
အ၀တ်အစားလဲလှယ်ပြီး ကျွန်တော်ရှေ့က ဦးဆောင်ထွက်တော့ သူလေးလည်းလိုက်လာတယ်။ အ၀တ်အစားလဲပြီးမှ စိတ်များပြောင်းသွားဦးမလားလို့ စိုးထင့်မိသေးတာလေ ကျွန်တော့်မှာ။ ဟိုတယ်အပြင်ရောက်တော့ အေးမြတဲ့ လေတွေက စီးကြိုနေတာ နှစ်ဦးသား ခပ်သွက်သွက် ကားစီလှမ်းကြပါရော။
'အစ်ကို့ပစ္စည်းကို ကျွန်တော် တကယ်သဘောကျတယ်၊ ဦးလေးတစ်ယောက်ကို သတိရမိစေသလားလို့...ဟိ'
'ဦးလေး? မင်းကလည်း တစ်မျိုးပဲ....လင်းစမ်းပါဦး'
'ငယ်ငယ်တုန်းက ဦးလေး အားကစားလုပ်တာ လိုက်လိုက်သွားရင်း မြင်ဖူးတာကိုပြောတာပါဗျ တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့'
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးသား လိင်ကိစ္စမပါတဲ့ တခြားအကြောင်းတွေပြောဖြစ်ကြတယ်။ သူဘယ်ကျောင်းမှာတက်နေဆဲဆိုတာ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေအကြောင်း ပြောဖြစ်ကြရင်း ကျွန်တော်နေတဲ့ တိုက်ခန်းရှေ့ရောက်ခဲ့ကြပါပြီ။ ကားပါကင်မှာ အသာရပ်ပြီးဆင်းတော့ ကောင်လေးက အလိုက်တသိ ကျွန်တော့်အ၀တ်အိတ်ကို လာကူပြီး ဆွဲပေးပါတယ်။ နှစ်ဦးသား သုံးလွှာမှာရှိတဲ့ ကျွန်တော့်အခန်းကို ခပ်သွက်သွက်တက်လာဖြစ်ကြတာ လှစ်ကနဲပဲ။
အခန်းထဲရောက်တော့ dim light ကိုပဲဖွင့်ဖြစ်ရရင်း တစ်ယောက် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ယောက် ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်ရမ်းဖြစ်ကြပါတယ်။ ချစ်စဖွယ်အပြုံးပိုင်ရှင်ကောင်လေး ကျွန်တော့်ရှေ့ရောက်နေပြီပဲ။ ဟုတ်တယ် ကောင်လေးဝတ်ထားတာ ဒီဇိုင်း မိုက်မိုက်လေးတွေပါတဲ့ တီရှပ်လေး။ အောက်ပိုင်းကတော့ လေးပေါ့။ တီရှပ်ကြပ်ကြပ်လေးကြောင့် တင်းရင်းနေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးကို ကျွန်တော် အသာပွတ် သပ်ရင်း သူ့နှုတ်ခမ်းထူအမ်းအမ်းလေးကို ခပ်ဖွဖွနမ်းမိရတယ်။ စက္ကန့်မဆိုင်း သူ့တီရှပ်ကို ချွတ်လိုက်တော့ ပေါ်လာတဲ့ နို့သီးခေါင်းမာ မာလေးကို လျှာနဲ့ဝိုက်ကာ ၀ိုက်ကာ ဆွဲပေးလိုက်ရာမှာ သူ့ခမျာ တွန့်တွန့်လူး။ နှာဝက နေတိုးတိုးဝင်လာတဲ့ ချွေးနံ့လေးတွေက ကျွန်တော့်စိတ်ကို မရိုးမရွဖြစ်စေသားပါ။ သူ့လက်အစုံဟာ ကျွန်တော့် ရှပ်ကိုဆွဲချွတ်တော့ အလိုက်သင့်နေပေးလိုက်တာ နှုတ်ခမ်းထူ အမ်းအမ်းလေးက ကျွန်တော့်ဂုတ်သား၊ ရင်အုပ်တို့မှ တစ်ဆင့် နို့သီးခေါင်းလေးတွေဆီ အား....အ...ရှီး။ သူဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိတယ်ဗျာ.....လျှာနဲ့ရစ်ဝိုက်တာမဟုတ်ဘဲ ခပ်ရွရွလေး ကိုက်လိုက် နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကြား ညှပ်ပြီးဆွဲလိုက်လုပ်နေတော့ တာ။
ရုတ်တရက် ဘောင်းဘီက ကြယ်သီးကို သူဖြုတ်ချလိုက်တာ ဘောင်းဘီက ကြမ်းပြင်မှာ ပုံကျသွားရင်း Rocket ကြီးက ရှင်းကနဲပေါ်လာရ ပါတယ်။ လက်ဖ၀ါးနုနုလေးတွေက ကျွန်တော့်ပေါင်တံကို ပွတ်သပ်နေသလို သူ့အနမ်း သူ့နှုတ်ခမ်းတွေဟာလည်း ဗိုက်က ဘယ်လီသား တွေ ချက်ပေါက်လေးတွေမှ တစ်ဆင့်မျက်နှာဆီ ချိန်ရွယ်ထားတဲ့ Rocket ကြီးကိုရောက်ရှိ အနမ်းဖွဖွပေးပါ၏။
နှုတ်ခမ်းလေးကို အသာဟရင်း ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို တဖြည်းဖြည်းမျိုချတာ ကျွန်တော့်ငပဲအရှည်ကြီး သူ့အာခံတွင်းထဲ အဆုံးဝင်သွား တဲ့အထိပါ။ ကောင်လေး သူ့ခေါင်းကို ခပ်သွက်သွက် လှုပ်ရှားရင်း မျက်ဝန်းများကို ကျွန်တော့်မျက်လုံးများဆီ အကြည့်စူးစိုက်ထားရင်း လက်ချောင်းများကတော့ ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းကလေးတွေကို ကလိတာ....ဘယ်လို ပြောရမှန်းမသိတဲ့ ဖီလင် ကျွန်တော်ခံစားရပါ တယ်။ ချစ်စဖွယ် အပြုံးလေး၊ ဖက်ထားချင်စရာ ကိုယ်လုံးကျစ်ကျစ်လေးရယ်၊ ကျွမ်းကျင်လှတဲ့ အပြုအစုများကို အမြဲပိုင်ဆိုင်ရရင် ကောင်းမှာ။အား.....မနေနိုင်တော့ ပြီးဆုံးတော့ မလိုဖြစ်လာချိန်မှာ ကောင်လေးကိုပွေ့ချီလိုက်ကာ ကုတင်ဆီကိုခေါ်ဆောင်သွားမိပါ တယ်။ ကုတင်ပေါ်အသာချပေးရင်း ဗိုက်သားလေးတွေ ချက်ပေါက်လေး....အတွင်းခံဘောင်းဘီပေါ်က တစ်ဆင့် ဖောင်းကားနေတဲ့ ချစ်စရာညီဘွားကို တရှိုက်မက်မက် အနမ်းပေးဖြစ်ပါရော။ ဘောင်းဘီကို တဖြည်းဖြည်းဆွဲချွတ်ရင်း ပေါ်ထွက်လာတဲ့အရာကို နှုတ်ခမ်း နှစ်လွှာနှင့် ဆွဲညှစ်ဖမ်းလိုက်ရင်း မျိုချလိုက်ပါတယ်။ အထုတ်အသွင်းခပ်ဖြေးဖြေးလုပ်ရင်း လက်တစ်ဖက်နှင့် ရွှေဥကို ကစားပေးဖြစ်တာ သူအတော်ကြိုက်ပုံရရဲ့။ ကျွန်တော် သူ့ရွှေဥတွေကို တစ်လုံးချင်းငုံစုပ်ပေးရင်း နောက်မှာတော့ လျှာဖျားလေးကို ခရေ၀ဆီရွှေ့ကာကစား ပေးဖြစ်ပါတယ်
တဖြည်းဖြည်း အသက်ရှူသံတွေမြန်လာသလို ညည်းတွားသံလေးတွေ အခန်းထဲပျံ့လွင့်လာပြီးနောက် ကိုယ်စီကိုယ်စီ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်း တွေကို ဆော့ကစားကြရင်း နှစ်ဦးသားကျေနပ်မှုဆက်ယူကြပါတယ်။ အတွင်းကျကျပတ်သက်ဖို့ မကြိုးစားဖြစ်ကြပဲ ထိတွေ့ပွက်သပ် နမ်းရှုံ့ရင်းသာ သာယာဖြစ်ကြပါပြီ။ နှုတ်ခမ်းများ မွတ်သိပ်စွာ ဖိကပ်ထားကြရင်း နောက်မှာ ကောင်လေးကအရင် ကျွန်တော့်ရင်အုပ်ဆီ ပျစ်ချွဲချွဲအရည်များ ပန်းထုတ်ပစ်ပါတော့တယ်။ 'အစ်ကို......အ....အ...ပြီးပြီ...' သူ့အသံလေးကြားရပြီးနောက် ကျွန်တော်သည်လည်း မထိန်းနိုင်စွာ ပန်းထုတ်မိပါပြီ အားရပါးရပေါ့။
ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းက သူ့နှုတ်ခမ်းကို ရုတ်တရက် သူခွာလိုက်ကာ အိပ်ယာပေါ်က ထရပ်ပါတယ်။ 'ညီ...ရေချိုးမလို့လား?' အ၀တ်အစား ကို အမြန်ကောက်ဝတ်ကာ အနမ်းတစ်ချက် ပေးရင်းပြန်ဖို့ဟန်ပြင်သောသူ့ကို မေးမိခြင်းပါ။
'ညီက လူတစ်ယောက်ကို တစ်ကြိမ်ပဲတွေ့တယ်ဗျ...။ ညီကငြီးငွေ့လွယ်တယ်...'
ခဏအကြာမှာတော့ သူအခန်းထဲမှ ခပ်သွက်သွက် ထွက်သွားကာ လှေကားထစ်များမှတစ်ဆင့် ပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ။ ကျွန်တော့် အိပ် ယာပေါ်နောက်ပြန်ပစ်လှဲလိုက်ရင်း ချွေးနံ့လေးတွေ ကိုယ်နံ့လေးတွေကို တပ်မက်စွာခံစားရင်း တွေ့ဆုံတဲ့ခဏသော အချိန်လေး တွေကို ပြန်စဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်။ sauna မှာမျက်ဝန်းခြင်းဆုံတယ်၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်နဲ့ ကစားတယ်၊ နောက်.....အ၀တ်အစား မြန်မြန်ဝတ်ကာ ခပ်သွက် သွက် ထွက်သွားတယ်လေ။ အပြင်မှာတစ်ယောက်ယောက် ကစောင့်နေလို့များလား သူ့ကောင်မလေးဆီ သွားဖို့သတိရသွား တာလား သက်ပြင်းမောကို ချကာ ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားဖြစ်ပါတယ် အတွေးချာချာလည်ရင်း။
'ဟုတ်ပါတယ်....ကိုယ်နားလည်ပါတယ်ကွာ၊ မင်းတို့လို ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ အတူတူနေချင်တာပေါ့'
အသက်အရွယ် ၂၅ကျော်လို့ ၃၀နားနီးလာပြီ ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူ ကိုယ်က ချစ်တဲ့သူနှင့် အတူတူ နေထိုင်ဖို့ မစဉ်းစားသေးဘူးလားတဲ့ တစ်မြို့တစ်ရွာက သူငယ်ချင်းက ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။ အခုလို ဟောတစ်ယောက် ဟောတစ်ယောက်တွဲပိုင်ခွင့် ချိန်းတွေ့ပိုင်ခွင့်ရှိနေ တာက ပိုကောင်းတယ်လို့ သူငယ်ချင်းတို့နှစ်ဦး အတူနေမယ် ကျွန်တော့်ကိုပြောပြစဉ်က ထင်မြင်ယူဆခဲ့ပါရဲ့။ ကိုယ့်လွယ်လပ်ခွင့် နှင့် အာရုံအလုံးစုံကို ၀ကွက်အပ်လိုက်ရခြင်းလေ။
အခုရော....အခုရော ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်နေပါသလား? အာရုံတစ်ခုတွယ်ငြိကြတယ်၊ ဆုံကြတယ်၊ ကိစ္စပြီးတော့ လမ်းခွဲတဲ့။ ချွေးနံ့ဆိုတာ ကြာရင် နှစ်သက်ဖွယ် ကိုယ်သင်းနံ့မဟုတ်တော့ဘဲ အော့အံချင်စရာ ဖြစ်ရပြီ။ ဒါဆို ....အချစ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ချွေးနံ့ကို အမြဲတစေ တပ်မက်တွယ်ငြိစေမှာလား။ ကျွန်တော် အဲဒီလို ချွေးနံ့ ကိုယ်နံ့တစ်ခု အခုရှူရှိုက်ချင်ပါရဲ့..။
လည်ချောင်းထဲပျို့တက်လာတဲ့ အံချင်စိတ်ကြောင့် အိပ်ယာခင်းကိုဆွဲယူလိုက်ကာ အ၀တ်လျှော်ခြင်းထဲကို ပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ မနေ့ က လက်ဆောင်ရတဲ့ လာဗင်ဒါနံ့သင်းသင်းလေးမွှေးတဲ့ အိပ်ယာခင်းကို လဲလိုက်မယ်။ အဲဒါကောင်းတယ်။
'ဟုတ်ကဲ့ ဒီနေ့ည ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရုပ်သံအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပါပြီ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ အေးချမ်းရွှင်လန်းကြပါစေ'
Alex Aung (22-8-2010)
Posted by Alex Aung at 6:53 PM No comments:
` ဖိုးခွား...အစ်ကိုကြီးကို နှုတ်ဆက်လိုက်အုံး...´ စကားပြောတတ်ခါစ ဖိုးခွားလေးမှာ မျက်နှာဖောင်းဖောင်းအိအိနှင့် အသားတွေက တစ်တစ်ရစ်ရစ် ရှိကာ တကယ့်ကို ချစ်စရာကောင်းသည်။ ဖိုးခွားလေး က အမေနှင့်မတူ။ သူ့အဖေ ကိုပိုင်နဲ့ တပုံစံတည်း။ ပြူးကျယ်ကျယ်မျက်လုံးများက အမြဲတောက်ပနေသည်။ မျက်ရစ်လေး ထင်းထင်းကလည်း ကိုပိုင့် သားပါလို့ ပြောနေသလိုပင်။ မသိမသာ လှိုင်းတွန့်ရှိသော ဆံပင်ပုံက အစ သဘာဝအတိုင်း လာတူနေပြန်သည်။ ဖိုးခွားက သူ့အမေနဲ့တူတာက ဖြူဖွေးနုနယ်တဲ့ အသားအရေ။ ဒီကလေး ကံကောင်းသည်။ အဖေနှင့် အသားအရေတူ လို့ကတော့ မည်းမည်းသည်းသည်းလေး ထွက်လာမည်။ ဖိုးခွားလေးကို တချက်ပွေ့ချီလိုက် ရင်း
` ကိုကြီးကို အကြာကြီးမခွဲရဘူးနော်....ဖိုးခွားလေး မရှိရင် ကိုကြီး ပျင်း နေတော့မှာ...´ ဖိုးခွားလေး အမေ မမိုးက သွားတက်လေး ပေါ်အောင် ပြုံးလိုက်သည်။ မမိုးနဲ့ ကိုပိုင်နှင့်ယှဉ်လိုက်ရင် မမိုးက အများကြီးပိုချောနေသည်။ ကိုပိုင်က အခန်းတံခါးသော့ကို သေချာ ခတ်ရင်း
` ကဝေ ... မင်းလားပျင်းမယ့်ကောင်....သူငယ်ချင်းတွေကိုတောင် အချိန် မနည်းပေးနေရတာ´ ကိုပိုင် ပြောတာလည်းမှန်သည်။ ဒါပေမယ့် အကုန်လုံးမမှန်။ သူငယ်ချင်း တွေဆိုတာ စာမေးပွဲနီးမှ ကျွန်တော့်ကို စာလာရှင်းခိုင်းဖို့သက်သက်ပင်ဖြစ်သည်။ သွားစရာ လာစရာ ပျော်စရာ ရှိရင် ကျွန်တော်မပါ.။ စာမေးဖို့၊ အလှူငွေကောက်ဖို့၊ကျူရှင်လခ ကောက်ဖို့ဆိုရင် ကျွန်တော်က မပါမဖြစ်။ ကျွန်တော့်ကို ဖုန်းဆက်ရင်လည်း သူတို့ မေ့နေသော သူငယ်ချင်းတယောက်ယောက်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် ကိုမေးရင်မေး၊ မမေးရင် သူတို့ ဒီလ ကျူရှင်လခ ကိုနောက်ကျ မှပေးမည်။ ခဏတာ စိုက်ပေးထားပါ။ ကျွန်တော့်အဖို့တော့ ဒါတွေဟာ ရိုးအီနေပြီ။ တခါတလေ ကျွန်တော်က မအားလို့ စာမရှင်းပြရင် ဂျွန်ဝေ က စိတ်ပုတ်တယ်ဆိုတာ ကပြောသေး။ ကျွန်တော့်မှာ တိုင်ပင်စရာ ညီအစ်ကို မောင်နှမ ကလည်းမရှိ။ အားအားရှိ ကိုပိုင်သာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အကြောင်းတွေကို ရင်ဖွင့်ခွင့်ပေးသော အစ်ကိုကြီး။ ကျွန်တော့်ကို အစစ အရာရာသင်ပေးသော အစ်ကိုကြီး။ အခုလည်း ကျောင်းပိတ်ထားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက ကိုယ်စီ ခရီးထွက်ကြသည်။ ကျွန်တော့်ကို လိုက်ပါအုံးလား မခေါ်။ ကျွန်တော်က တကယ့်ကို အပေါင်းအသင်း မဆံ့တဲ့သတ္တ၀ါလား။
` ကိုပိုင် ကလည်း အတည်ပေါက်နဲ့ မနောက်နဲ့လေ…ကျွန်တော့်အကြောင်းလည်းသိသားနဲ့..´
` ကဲ…ငါ့မောင်လေးက အိမ်ကို သေချာကြည့်ပေးထား…ပြန်လာရင် မုန့်တွေဝယ်ခဲ့ပေးမယ်´ ကိုပိုင် ရဲ့မိန်းမ မမိုးက အင်းလေးဇာတိ။ ကျွန်တော်မှာနေကျအရာကိုပဲ ကျွန်တော် မှာလိုက်တော့တယ်။
` ကျွန်တော် မုန့်တော့မစားတော့ပါဘူး…ပြန်လာရင် ကျွန်တော့်အတွက် ချည်သားစစ်စစ်နဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ ချည်အင်္ကျီလေးတထည်ပဲဝယ်လာခဲ့ပေး…ပြန်လာရင် ကျွန်တော် ပိုက်ဆံပြန်ပေးမယ်´ ဖိုးခွားလေးက ကျွန်တော့်ဆံပင်ကို လာဆွဲသည်။ သနားခါးအဖွေးသားနဲ့ ဖိုးခွားလေးရဲ့ ပါးပြင်အိအိ လေးကို အားရပါးရ နမ်းပစ်လိုက်သည်။
` တွေ့လား..မိုး… ကဝေ က တကယ်ခင်တာမဟုတ်ဘူး…တစိမ်းဆန်တယ်…´ ကိုပိုင်က ပြောရင်းနဲ့ လှေကားထစ်တွေအတိုင်း ဆင်းသွားသည်။
` ဟာ …မဟုတ်ပါဘူး ကိုပိုင်ရာ…ကျွန်တော်က ဈေးကြီးမှာ ကြောက်လို့…´
` မင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေက မင်းကို အလိုရှိမှသုံးကြတာ´ ကိုပိုင် အဲ့ဒီိလို ပြောဖူး သည်။ သူငယ်ချင်း ဆိုတာ ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရမလဲ။ ကျွန်တော်က ကလေးချီပြီး သူတို့နောက်ကလိုက်ဆင်းသည်။
ကျွန်တော်တို့နေတာ သိပ်မမြင့်တော့ အဆင်ပြေသည်။ ဖိုးခွားလေးက ခါတိုင်းထက် ပိုလေးလာသည်။
` ကဲ… ကဝေ…ရပြီ…အိမ်ပေါ်တတ်တော့…ဒီတခေါက် မင်း နှစ်အိမ်စလုံးစောင့်ပေ့ါ´ ကျွန်တော့် အဖေ နဲ့ အမေက သူ့မောင်နှမတွေခေါ်လို့ နယ်ပြန်သွားသည်။ တစ်လ လောက်ကြာမည်ထင်။ အခုတော့ ကျွန်တော် တစ်ယောက် တည်းပျင်းလို့ကျန်ခဲ့တော့မည်။
` ကိုပိုင် တို့ ဘယ်တော့လောက်ပြန်လာမှာလဲ…´
` အင်း…ကဲ…ဖိုးခွားလေး…အကြာကြီးမနေနဲ့နော်…ကိုဝေ လွမ်းနေမှာ….´ မမိုးက ပစ္စည်းတွေကို ကားထဲထည့်သည်။ မမိုးက ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်လည်းလှသည်။ ကလေး အမေဖြစ်တာတောင် အခုထိ လှပတုန်း။ ဖိုးခွားလေးရဲ့ ပါးကို နောက်တစ်ခေါက်ထပ်နမ်း လိုက်သည်။
` ငါ့သားကိုပဲ နမ်းမနေနဲ့… ငါ့သားကို ကောင်မလေးတွေနမ်းဖို့လည်းချန်ထားအုံး´ ကိုပိုင်က စကား ပြောရင် တည့်ပြောတတ်ပေမယ့် တကယ့်ကို ခင်တတ်သည်။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း ညီအရင်းတစ်ယောက်လို ခင်သည်။
` မရပါဘူး…ဖိုးခွားလေးက ကျွန်တော်နမ်းဖို့…ဟုတ်တယ်မလား…ဖိုးခွား…ဖေကြီးကိုပြော ပြလိုက် ကိုဝေ ကိုချစ်တယ်လို့..´ ဖိုးခွားလေးက တခစ်ခစ်နဲ့ရယ်သည်။ ဂျယ်လီတွေ၊ မုန့်တွေကြောင့်လားမသိ။ ကျွန်တော့်ပါး ကို တချက် ပြန်နမ်းလိုက်သည်။
` ဟား…တွေ့လား ကိုပိုင်…ကျွန်တော့်ကို နမ်းတယ်…´ ကလေးကို မမိုးလက်ထည့်လိုက်သည်။
` နမ်းမှာပေါ့…ကဝေ ကို မိန်းခလေး ထင်လို့နေမှာပေါ့…´ ထိုစကားက သာမန်လူအတွက် ဘာမှ မဟုတ် ပေမယ့် ကျွန်တော့် လိုလူအတွက် ခံစားရသည်။ စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်။ ကိုပိုင် ကျွန်တော် ဂေး ဆိုတာကို သိနေတာလား။
` ကဲပါ…ကိုပိုင်…စိတ်ချ…အိမ်ကို ကျွန်တော် သေချာကြည့်ပေးထားမယ်….စိတ်ချလက်ချသွား…. ဒါပေမယ့် အကြာကြီးမနေပါနဲ့…ဖိုးခွားလေးကို မခွဲနိုင်ဘူး…´ ကျွန်တော် အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရလျှင် ဖိုးခွားလေးထက် ကိုပိုင်ကို ကျွန်တော် မခွဲချင်။ အသားညိုညိုနှင့် ယောကျာ်းပီသသော၊ အစ်ကို ရင်းတယောက်လို ဂရုစိုက်သော ကိုပိုင် ကိုကျွန်တော် ခဏလေးမှတောင် မခွဲချင်ပါ။ `ပိုနေပြန်ပြီ…ကဲသွားပြီ။´ မမိုးက ဖိုးခွားလေး လက်ကိုကိုင်ပြီး..
` သား…ကိုဝေ့ကို တာ့တာ လုပ်လိုက်….´ ဖိုးခွားလေးက သူ့လက်ကလေးကို ရမ်းပြသည်မှာ ချစ်စရာ ကောင်းသည်။ ကိုပိုင်က ကျွန်တော့်ကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်လို့ ပြောလိုက်သည့် အကြည့်မျိုးဖြင့်ကြည့်လိုက်သည်။
` တာ့တာ… အာဝါး…´ ကိုပိုင်တို့ ကားလေး တအိအိ လှိမ့်သွားသည်။ ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှာ ဘာမှန်း မသိ လွမ်းဆွတ်မိသည်။ ကျွန်တော် အိမ်ပေါ်ချက်ချင်းမတတ်သေးဘဲ ကိုပိုင်တို့ကားလေး လမ်းထဲက ထွက်သွားသည့်အထိ ကြည့်နေမိသည်။ မိုးသားတွေညို့လာသည်။ မိုးတွင်းရဲ့ မြေသင်းနံ့လေးက ဆွတ်ပျံ့လာသည်။ မိုးတပေါက်စ နှစ်ပေါက်စ ရွာလာသည်။ ဒီညတော့ မိုးအေးအေးထဲမှာ လွမ်းရတော့မည်။ မိုးစက်တွေ ကျွန်တော့် ခေါင်းပေါ် ကျလာမှ ကျွန်တော် အိမ်ပေါ်ပြေးတတ်လိုက်သည်။ အ၀တ်တွေ သိမ်းရအုံးမည်။
ဖိုးခွားလေး တို့သွားတာတောင် နှစ်ရက်မြောက်ရှိသွားပြီ။ အမေတို့ အဖေ တို့တောင် နောက်သုံး ရက်နေဆိုရင် ပြန်လာမည်။ မလာရင်လည်း ကျွန်တော်ပျင်းလို့သေနိုင်သည်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ TV မကြည့်ရင် အင်တာနက် ဆိုင်နဲ့ အချိန်ကုန်နေတတ်သည်။
` ကဝေ…ကဝေ….´ ကိုပိုင်ရဲ့ခေါ်သံ။ ကဝေ လို့ခေါ်တာ ကိုပိုင်က လွဲလို့ ဘယ်သူရှိအုံးမှာလဲ။ ကျွန်တော် တံခါးကို အမြန်သွားဖွင့်လိုက်တော့ ကိုပိုင်က လှေခါးရဲ့ တ၀က်တောင်ရောက်နေပြီ။ ကျွန်တော် အမြန်ပြေးဆင်း လိုက်သည်။
` ကိုပိုင် ဒီတခေါက်တော့ စောသားပဲ…´ အထုပ်တွေကို သယ်ရင်း ကိုပိုင်က လှမ်းအော်သည်။
` ဖြည်းဖြည်းဆင်း…မင်းချော်ကျလို့ကတော့ သုံးယောက်စလုံးမသာ ပေါ်မယ်..´ ကျွန်တော် လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့် အရွယ်သာသာ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့သည်။ ကိုပိုင့် လက်ထဲက အထုပ် ကို ကျွန်တော် လှမ်းယူလိုက်သည်။
` ကိုပိုင်..ဖိုးခွားလေး တို့ကော…´
` အပေါ်ရောက်မှမေးတော့…´ ဒါဆို ဖိုးခွားလေးနဲ့ မမိုးနေခဲ့သည်ပေါ့။ ထူးဆန်းသည်။ အရင်တနှစ်က တမိသားစုလုံးပြန်လာသည်ပဲ။ အိမ်ထဲရောက်တော့ ကိုပိုင် အထုပ်တွေချပြီး အရင်သွားထိုင်သည်။ ကျွန်တော့် အိမ် ၀င်သွားပြီး ရေဘူးနဲ့ ရေခွက်သွားယူလိုက်သည်။ ရေခဲရေထည့်ထားသော ရေခွက်ကို ကိုပိုင် ကိုအရင်မပေးဘဲ ကိုပိုင် နှင့်ပါလာသော သူကိုပေးလိုက်သည်။
` ကဝေ တို့များ အသစ်တွေ့တော့ အဟောင်းမေ့တယ်….´ ကိုပိုင့် စကားက စရုံသက်သက် ဆိုပေ မယ့် စကား က အဓိပ္ပာယ် နှစ်မျိုးထွက်နေသည်။
` မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ။ ဧည့်သည်ကို အရင် ဧည့်ခံတာပါ။ ကိုပိုင်က အိမ်ရှင်ပဲဟာ´ ကိုပိုင်နှင့်ပါလာသော ကောင်လေးမှာ မမိုးနဲ့ရုပ်ဆင်သည်။ အရပ်အမောင်းက ကိုပိုင့်ထက်တောင် မြင့်သေးသည်။
`ကဲ…ရေဘူး ပဲငါ့ကိုပေးတော့…´ အင်္ကျီကြယ်သီးကို ရင်ညွန့်အထိဖွင့်ထားသော ကိုပိုင့်ရဲ့ ရင်အုပ်ကားကားကို ကျွန်တော် ငေးမိသည်။ ရင်ဘတ်မွေး ရေးရေးလေးက ကိုပိုင့်ရဲ့ မောက်မို့နေသော ရင်အုပ်အလှကို အားဖြည့်ပေးသည်။ ရေဘူး ကို အားရပါးရမော့သောက်လောက်သည်။ ပါးစပ်ကနေ စီးကျလာတဲ့ ရေစီးကြောင်းက ရင်ဘတ် မွေးတွေကြား ကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက်စီးဆင်းသွားသည်။
` ခုမှပဲ အမောပြေသွားတယ်… ကဝေ…ဒါ မမိုးရဲ့ မောင်ဝမ်းကွဲ… ရန်ကုန်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းလာတတ်တာ… မင်းက ဘိုလိုမှုတ်တာကျွမ်းတယ်ဆိုတော့… မင်းသူနဲ့ မှုတ်လို့ရတာပေါ့´ ကိုပိုင့်စကားတွေက ရှေ့မလွတ်နောက်မလွတ်။ ကိုပိုင်ပြောတာကို ကျွန်တော် ထပ်ဖြေမရှင်းတော့။
` ဒီလောက်လဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာ… ကျွန်တော့်နာမည် ဂျွန်ဝေ..ပါ။ ကိုပိုင်ခေါ်သလို ကဝေ လို့ခေါ်လည်းရပါတယ်။ ´ ကိုပိုင့်ယောက်ဖက တကယ့်ကိုလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပြုံးပြသည်။
` အာကာ ပါ။ နာမည်အရင်းက အာကာမိုးမြင့် ပါ။´ သူ့နာမည်ကို သူခေါ်ရင်း နှုတ်ခမ်းထောင့်က အပြုံးတစ်ခု ဖြတ်သွားသည်။ ဘာသဘောနဲ့ ရီတာလဲ။
` နာမည်က အရှည်ကြီးပဲ…´
` နာမည်တင် ရှည်တာမဟုတ်ဘူးကွ… ´ ကိုပိုင်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း စကားက ရှေ့နောက်မလွတ်။
` ကိုပိုင်က မြင်ဖူးလို့လား´ ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော် ပြန်တွယ်လို့ရပြီ။
` ကဝေ တို့များ…. ဒါပဲတွေးနေတယ်….ငါက အရပ်ရှည်တာကိုပြောတာ…´ အာကာ ကကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီး ပြုံးရုံတင်ပြုံးလိုက်သည်။ ရီရမှာ အားနာလို့နှင့်တူသည်။ ခံပေအုံး ကဝေ…။
` ကိုပိုင်…ကျွန်တော့်ကို ဖဲ့မယ်ဆိုတာကြီးပဲ…´ ကိုပိုင်က နှဖူးပေါ်က ချွေးကို ပုဆိုးကိုဖြေပြီး သုတ်လိုက်သည်။ ကိုပိုင့်ရဲ့ ကိုယ်ရနံ့ က ကျွန်တော့်ကို တကယ်ပဲ မူးယစ်ရီဝေသွားစေသည်။
` မင်းက ဖဲ့ချင်စရာကိုကွ´
` ကိုပိုင်….´ ကျွန်တော် တချက်ပဲ ခပ်ကျယ်ကျယ်အော်ပေးလိုက်သည်။ ကိုပိုင်က ပုဆိုးကို ခပ်တိုတိုဝတ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ပါးတွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ သူလုပ်နေကျအတိုင်း ဆွဲညစ်လိုက်သည်။
`မင်းက ပိုကိုပိုတယ်….ကဲ…ငါ အိမ်သာသွားတတ်လိုက်အုံးမယ်…မင်းတို့နှစ်ယောက်စကား ပြောနှင့်´
ကိုပိုင်ရဲ့ တခါတခါ အခုလို လုပ်ပုံက ကျွန်တော့်ကို အရူးအမူးဖြစ်သွားစေသည်။ ကိုပိုင့်အနေနဲ့ကတော့ ညီငယ် တစ်ယောက် ကိုချစ်လို့ ပုံမှန် ဆက်ဆံတာမျိုး။ ဒါပေမယ့် တခါတခါ ကိုပိုင့် အကြည့်တွေက…။ နောက်ဖေးကို တဒုန်းဒုန်း လမ်းလျောက်သွားတဲ့ ကိုပိုင့်ရဲ့ ကျစ်လစ်လုံးဝန်းနေတဲ့ ဖင်တွေကို ကျွန်တော် ငေးမိသွားသည်။
` ကဝေ… ဘာတက်ဖို့ စိတ်ကူးထားလဲ…´ အာကာ့ ရဲ့ အသံက တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်။ ခုမှသေချာကြည့်မိသည်။ အာကာ မှာ တကယ့်ကို ကြည့်ကောင်းတဲ့ ချွန်မြတဲ့နှာတံရှိသည်။ ပါးလွနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေက အခုလို ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ စကားသံတွေ ထွက်ပေါ်လာတာလား။
` နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်တတ်မယ်လို့ တော့စိတ်ကူးထားတာပဲ…အာကာကော..´
` ကျွန်တော်က အီးမေဂျာ တတ်ချင်တယ်…ကိုပိုင် ပြောသလို ဘိုလိုမှုတ်တတ်ချင်တယ်…´ အာကာ ကလည်းမ လွယ်ပါလား။ စကားထဲက ဇာတိပြနေပြန်ပြီ။
`ကျွန်တော်လည်း အင်္ဂလိပ်စာဝါသနာပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် ၀တ္ထုတွေဖတ်ရတာကို ကြိုက်တယ်။´
` ကျွန်တော်လည်း အရမ်းကြိုက်တယ်။ ၀တ္ထုတိုလေးတွေဖတ်ရတာပိုကြိုက်တယ်´ အာကာ စကားပြောရင် မျက်လုံးတွေက ပြုံးနေသည်။ ခုမှ သေချာသတိထားမိသည်။ အာကာရဲ့ ရှေ့သွားလေးနှစ်ချောင်းက သိသိသာသာကြီးနေသည်။ ယုန်သွား လေးနှင့် ချစ်ဖို့ကောင်းသည်။
` ဟုတ်ပ… ၀တ္ထုရှည်တွေဆို… ဘယ်တော့မှဖတ်လို့မပြီးဘူး….´ ပြောရင်းနှင့် ကျွန်တော် ခုမှ သတိရသည်။ ကိုပိုင် ဒီတခါ သွားတာ ၂ရက်ပဲရှိသေးသည်။ အစောကြီးပြန်လာသည်။
` အေ…ဒါနဲ့…ကိုပိုင်…ဘာလို့အစောကြီးပြန်လာတာလဲ…´ ကျွန်တော် ကိုပိုင့်ကို မေးလျင် ဖြေချင်မှ ဖြေမည်။ ကိုပိုင့် အကြောင်းအသိဆုံး။
` ကျွန်တော့်ကို မပြောနဲ့လို့ ပိတ်ထားပေမယ့်…ကျွန်တော့်ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့ ပြောမှဖြစ်မယ်…ဒါပေမယ့် …ကိုပိုင့်ကိုတော့ ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတာ သွားမပြောလိုက်ပါနဲ့…မသိသလိုပဲနေပေးပါဗျာ´
လေသံ ချက်ခြင်းကိုပြောင်းသွားသည်။ လေသံက ခြေထောက်ဖော့လမ်းလျောက်လာသလို ဖော့ဖော့လေး။ ဒါပေမယ့် စကားလုံးတိုင်းက ကြည်လင်ပြတ်သားနေသည်။ အာကာ ရဲ့ ဆွဲဆောင်နိုင်မှုတွေက တယ်လည်းများသကိုး။
` အင်း..ကျွန်တော် ကတိတည်ပါတယ်´ အာကာ က သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို တချက်စုပ်သတ်လိုက်သည်။
` ဟိုမှာ မမိုးနဲ့ အကို စကားများကြတယ်။ တော်တော်လေး များကြပုံတယ်။ ကျွန်တော် သူတို့အိမ်ရောက်သွားတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စကားမပြောဘူး။ ခု ဒီနေ့ အကို ကျွန်တော့်ကိုခေါ်ပြီး ချက်ချင်း ရန်ကုန်ဆင်းချလာတာပဲ´ မမိုးက စကားနည်းနည်းများတာ ကျွန်တော်အသိ။ ယောကျာ်း ဆိုတာကလည်း ကျောပူတာ ခံနိုင်တယ် နားပူတာ မခံနိုင်တဲ့အမျိုးအစားဆိုတော့။
` ဒါဆို..မမိုးနဲ့ ဖိုးခွားလေး က ဘယ်တော့ ပြန်လာမှာလဲ´
`ကျွန်တော်လည်းမသိ။ အကို သွားခေါ်မှ ပြန်လာမယ်ထင်တာပဲ…´
` အင်း…´ ကျွန်တော် ကိုပိုင် အိမ်နောက်ဖေးက ထွက်လာတာမြင်တော့ အာကာ့ကိုမျက်စပစ်ပြလိုက်သည်။
` ကျွန်တော့်မှာ အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုတွေရှိတယ်…အာကာ ယူဖတ်ချင်ရင် ယူဖတ်လေ။´
` မပေးဖတ်လည်း တောင်းဖတ်မှာ´ ကိုပိုင် က နားစွန်နားဖျားကြားပြီး
` မင်းတို့တွေ ယောကျာ်းချင်းချင်း ဘာကို ဖက်မှာလဲ…´ ကိုပိုင်က ပုဆိုးကို ဖြန့်ပြီး ပုဆိုးခါးပုံစနှင့် အားရပါးရသုတ်နေသည်။ GYM သွားပြီး တကူးတက လေ့ကျင့်မထားပေမယ့် ကိုပိုင့်ရဲ့ Belly သားတွေက ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်။
ချက် အောက်တည့်တည့်မှာ အောက်ကိုပြေးဆင်းသွားသော အမွေးကောက်ကွေးကွေးလေးများ ကိုတချက် တချက် မြင်လိုက်ရသည်။ ကိုပိုင့် ရဲ့ အတွင်းခံ အဖြူရောင်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ ကိုပိုင်က အတွင်းခံဆို အဖြူပဲ ၀တ်တတ်တာကို မမိုးတခေါက်ပြောလို့သိသည်။ အဖြူရောင် ကိုဖြူဖွေးနေအောင် လျှော်ရတာလောက် စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတာ မရှိ။
` ကိုပိုင်က ဒါပဲတွေးနေတယ်။´
` ကဝေ နဲ့ နေတာကြာလို့ ဓာတ်ကူးသွားတာ´ ` ကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေစိတ်မ၀င်စားဘူး´ ကိုပိုင်က တဟက်ဟက်နဲ့ သောက်မြင်ကပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ရယ်သံနဲ့ရယ်လိုက်သည်။ပြီးမှ
` အဟမ်း..ဟမ်း…ဟွတ်…ချောင်းကလည်း အလိုက်ကမ်းဆိုးမသိ ခုမှဆိုးတယ်…´
` တော်ပြီဗျာ…ကျွန်တော်…အိမ်မှာရေနွေးအိုးတည်ထားတယ်…သွားကြည့်လိုက်အုံးမယ်…´ ကိုပိုင့်အကြည့်က တချက်ပြောင်းသွားသည်။ `မင်းကဘာသဘောလဲ´ ဆိုတဲ့ အကြည့်မျိုး။
` သဘော… ငါက..သွားချင်တဲ့သူကို မတားတတ်ဘူး…´ ကိုပိုင်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေက တခါတလေ မုန်းဖို့ကောင်းသည်။ ဘယ်လိုပဲပြောပြော အကြည့်စူးရှတဲ့ကိုပိုင့် အကြည့်တွေကိုတော့ ကျွန်တော်မခံနိုင်ပါ။
`အာကာ…နောက် ၁နာရီလောက်ကြာရင် ကျွန်တော်လာခေါ်မယ်…ခုတော့ အေးဆေးနားပြီး ရေမိုးချိုးထားပေါ့…´ `ဘယ်သွားကြမှာလဲ…´
` ဘယ်သွားသွားပေါ့… ကိုပိုင့်ကို ခေါ်လို့လား´ ကိုပိုင်က ဗြုန်းခနဲ ကျွန်တော့်ခါးကို အနောက်ကနေ သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့် လည်ပင်းတွေကို ခပ်ဖွဖွကိုက်လိုက်သည်။
` မင်းက တကယ့်..ကောင်မလေး အတိုင်းပဲ…စိတ်ကောက်တယ်…နောက်တခါ…ခုလိုလုပ်ရင် ကိုက်စားပစ်မယ်…´ ကျွန်တော် ကိုပိုင့် လက်တွေကို အတင်းဆွဲဖြုတ်တော့ ကျွန်တော့်ညာဖက် တင်ပါးတွေကို ခပ်ပျော့ပျော့ အသားချောင်းရဲ့ ထိတွေ့မှုကိုခံစားလိုက်ရသည်။ ကိုပိုင် မမိုးရှိရင် ဒီလိုမျိုးတခါမှမလုပ်တတ်။
` စားလို့ရမလား…တော်ပြီဗျာ…ကျွန်တော်သွားတော့မယ်…တော်ကြာ ရေနွေးအိုးဝေကျနေအုံးမယ်´
ကိုပိုင်ရဲ့ မုတ်ဆိတ်ငုတ်တိုလေးတွေက ကျွန်တော့်တကိုယ်လုံးကို ကြက်သီးတွေ တဖျန်းဖျန်းထသွားစေသည်။
` နောက်..စိတ်ကောက်ရင်…တကယ်ကိုက်စားပစ်မယ်…ခုတော့ ထားလိုက်တော့…´ ကျွန်တော့်ကို လွတ်လိုက်တော့ လည်ပင်းပေါ်က ကိုပိုင့်ရဲ့ တံတွေးတွေက စိုစိစိ။ ရင်ဘတ်ထဲအထိ နွေးထွေး သွားသည်။ အခု လုပ်ပုံမျိုးကို မမိုး မြင်လို့ကတော့ ဘယ်လိုနေမှန်းမသိ။ အာကာ ကတော့ သေသေချာချာကို မျက်လုံးအ၀ိုင်းသားနှင့်ကြည့်နေသည်။
` ငါကော မပါဘူးလား…´
` လိုက်ချင်ရင် လိုက်ခဲ့ပေါ့ … ကျွန်တော်ကတော့ ညစ်ပတ်တဲ့ သူကိုမခေါ်ဘူး..´
` မခေါ်လည်းလိုက်မှာပဲ…တော်ကြာ အာကာ ကို တခုခုလုပ်လိုက်မှဖြင့်…´ ကိုပိုင် ဟာ ယောကျာ်းစစ်စစ် တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကို ကျွန်တော် မယုံချင်တော့။
` လိုက်ဗျာ…ကျွန်တော်က လိပ်ပြာလုံတယ်…ကိုပိုင် လို ကွယ်ရာမှာ ဘာမှမလုပ်ဘူး…´ ကျွန်တော်က သဘောရိုးနဲ့ပြောလိုက်ပေမယ့် ကိုပိုင်တော်တော် စိတ်ဆိုးသွားပုံရတယ်။ မျက်နှာကို တချက်တည်း ပျက်သွားသည်။ ခုနက ပြုံးနေတဲ့ ပျော်နေတဲ့ မျက်နှာမဟုတ်တော့။
` ငါက ဘာလုပ်နေလို့လဲ´
` မသိဘူးလေ…´ ဒီစကား က ကိုပိုင် ဒေါသကို ပိုကြီးသွားသည်။
` ကဝေ…မင်းနာတော့မယ်..သွားတော့…ငါ…..တော်ပြီ….မင်း…တော်ကြာမှပြန်လာခဲ့…´ ကိုပိုင့်ရဲ့ အကြည့်တွေကို ကျွန်တော် ချက်ချင်းကြောက်လာသည်။ ဘာသဘောလဲ။
အာကာ က ခွေးခြေ လေးမှာ ထိုင်နေသည်။ ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှာ ရေနွေးအိုးဆူသလို တပွက်ပွက်နဲ့ ဆူသွားသည်။
တစ်ယောက်တည်း ညတွေကို ဖြတ်သန်းရသည်မှာ သေလောက်အောင် အထီးကျန်သည်။ ဒီည မိုးက ဖွဲဖွဲလေးရွာနေသည်။ အေးစက်စက် ည တွေက အလွမ်းကို အားဖြည့်ပေးသည်။ ကျွန်တော် ဘာကိုလွမ်းနေသည်လဲ။ မသိ။
အိမ်ရှေ့ ၀ရံတာက နေအောက်ကို ငုံကြည့်တော့ လမ်းမီးတိုင်ရဲ့ ၀ါကျင့်ကျင့် အလင်းရောင်က တစုံတယောက်ကို မျှော်နေ သည့်ပုံစံ။ အတွေးတွေက ပွစာကြဲနေသည်။ လျှပ်စီးတခု လျှပ်ခနဲ လက်သွားသည်။ မိုးတွင်းမှာ ကျွန်တော် အကြောက်ဆုံး က ဟောဒီ့ လျှပ်စီးလက်တာတွေ၊ ပြီးရင် တအောင့်နေမှ ဂျိန်း ဆိုပြီး အသံကြီးကို ကြားရမည်။ (လူတိုင်းသိနေတာကို သိုးငယ် ထည့်ရေးနေ၏) ကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးက အဲ့ဒီ့ လျှပ်စီးလက်သံတွေ။ ဒါပေမယ့် မိုးည တွေကို ကျွန်တော်ချစ်သည်။ (facebook ပေါ်က မိုးည မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် မိုးည က ချစ်ဖို့ ကောင်းသည်) မိုးရေပါသော လေ တချက်ဝှေ့တိုက်သွားသည်။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ကျွန်တော် မျက်ရည်ကျလာသည်။ ငါ…ဘာကိုလွမ်းနေတာလဲ။ ညစာ စားရမည့်အချိန်ကျော်လာလို့လားမသိ။ ဗိုက်က ဆာလာသည်။ နာရီကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ ဘုရားရေ…။ ၈ နာရီတောင်ထိုးနေပြီ။ အကာ ကိုလာခေါ်မယ်ပြောပြီးတော့…ကျွန်တော် မေ့သွားသည်။ မိုးည တွေက ကျွန်တော့်ကို အဲ့ဒီလောက် အရာအားလုံးကိုမေ့နိုင်စွမ်းရှိသည်လား။
`ဂီ…ဂီ…´ ကျွန်တော့်အိမ်ရဲ့ BELL ခေါ်သံက နားဝင်မချိုသာသေချာသည်။ အိပ်မောကျနေပါက လန့်ဖြန့်ပြီး နိုးထစေသည်။
` ကဝေ…မင်းဘာလုပ်နေတာလဲ´ ကိုပိုင့်အသံ။ ကျွန်တော်တံခါးဖွင့်လိုက်တော့ ကိုပိုင်က အထုပ်တထုပ်ကို ကျွန်တော့်လက်ထဲထည့်ပေးသည်။ တကိုယ်လုံးလည်းစိုရွဲလို့။
` ဟို….ကျွန်တော်….´ တခေါင်းလုံးရေတွေစိုနေတဲ့ ကိုပိုင်ရဲ့ မျက်နှာက ခါတိုင်းထက် အဆ တစ်ရာ လောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိနေသည်။ အနည်းငယ်ဖျော့တော့သွားသော နှုတ်ခမ်းတစုံက မသိမသာ တုန်ခါနေသည်။ ဒါပေမယ့် ကိုပိုင့် မျက်ဝန်းဒေါင့်တွေက နီရဲနေသည်။
` ဟို မနေနဲ့…ရော့..သွားထည့်စား…မင်းအိပ်ပျော်သွားတယ်မလား….အိပ်ပုပ်…´
` ဟုတ်ဘူး…ကျွန်တော်…မေ့သွားလို့…´ မိုးရေကြောင့် ကပ်နေတဲ့ ရှပ်အင်္ကျီကို အနည်းငယ် ဆွဲဖွလိုက်သည်။ အသားနှင့်တထပ်တည်းကပ်နေသော ကိုပိုင့်ရဲ့ ပုဆိုးကို ကျွန်တော်မသိမသာ ကြည့်မိသည်။ ကျစ်လစ်သော ပေါင်တံကြီးများက အထင်းသား။ ဒါ့ထက် ပေါင်ကြားက ဖောင်းနေသော ကိုပိုင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်းလေးကို ငေးမိသည်။
` အကြောင်းပြချက်ပေးမနေနဲ့…အေးကုန်လိမ့်မယ်…ငါလည်း အင်္ကျီသွားလဲလိုက်အုံးမယ်..´
` ဟုတ်ကဲ့….´ နောက်ပြန်လှည့်ထွက်သွားတဲ့အခါ ကိုပိုင့်ရဲ့ တင်ပါးတွေက တင်းရင်းကျစ်လစ်လုံးဝန်းနေသည်။ (တင်စား ထားတာ နည်းနည်းလွန်သွား၏)။ ကျွန်တော် ခုနက ဖြစ်နေတဲ့ အလွမ်းတွေအစား ဆာလောင်မှုက ကြီးစိုးသွားသည်။ ကိုပိုင် ၀ယ်လာပေးသော ကြေးအိုး ကို ကျွန်တော်နောက်ဖေးကိုယူပြီး…လိင်စိတ်ဆာလောင်မှုထက် ဗိုက်ရဲ့ဆာလောင်မှုကို ဖြေသိမ့်လိုက်သည်။ စားသောက်ပြီးတော့ ကိုပိုင့် အိမ်ဘက်ကို သွားလိုက်သည်။ ကိုပိုင် ပဲ တံခါးလာဖွင့်ပေးသည်။ ဆံပင်တွေကို Dryer နဲ့ မမှုတ်တတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် (Dryer သုံးချင်တိုင်းလည်း လျှပ်စစ်မီးမှမရှိတာ) ကိုပိုင့် ဆံပင်တွေက စိုထိုင်းထိုင်း။ နှုတ်ခမ်းတွေကတော့ ခုနက ထက်စာရင် သွေးရောင်လွမ်းလာသည်။ မျက်စိက တော့နီနေတုန်း။
` ဘာလာလုပ်တာလဲ´ ဒီစကားကို ကိုပိုင်မဟုတ်ဘဲ တခြားသူပြောပါက ကျွန်တော် ချက်ချင်း ပြန်လှည့်ထွက်သွားမည်။
` အာကာ့ ကိုလာခေါ်တာ…´
` အာကာ အိပ်သွားပြီ´ ကိုပိုင်က အတည်ပေါက်နှင့်နောက်တတ်သည် ကို ကျွန်တော်သိသည်။ ဒါပေမယ့် အနောက်တော့ မသန်ပါ။ (အစအန သန်သည်ကိုဆို၏။ နှာတွေးမတွေးရ)။
` ဖောပြီ…ခုမှ အစောကြီး…´
` ဟာ…ဟ…အာကာက မင်းလို ရန်ကုန်သားမှမဟုတ်တာ ကဝေရ…´ ပြောတော့လည်း ဟုတ် သလိုလိုပင်။ အိမ်ထဲရောက်သွားတော့ တကယ့် အာကာကို မတွေ့။ ကိုပိုင်တို့ရဲ့ အခန်းထဲတွင် အိပ်နေပုံပေါက်သည်။
` အိပ်နေပါတယ်ဆိုမှ…မင်းက ဘာလဲ..လိုက်ကြည့်အုံးမလို့လား..´ ကိုပိုင်က အရင်လို စကားတွေက သွက်လက်မှုမရှိသလိုပင်။ ကိုပိုင် စိတ်ညစ်နေရင် လုပ်တတ်သည့် လက်ဆစ်တွေကို ချိုးနေသည်။ ( ဘာကြောင့် စိတ်ညစ်ရင် လက်ဆစ်ချိုးလည်းမသိပါ။ သိုးငယ် တော့ စိတ်ညစ်ရင် အောကားတွေထိုင်ကြည့်ပစ်သည်။ သူငယ်ချင်းတို့ကော စိတ်ညစ်ရင် ဘာလုပ်တုန်း။)
` မင်းကော..မအိပ်သေးဘူးလား…´ ကိုပိုင်က TV ရှေ့က ဆိုဖာပေါ်တွင်သွားထိုင်သည်။ အရောင်မှိန်နေပြီဖြစ်သော အိမ်နေရင်းပုဆိုးနှင့် စွပ်ကျယ်လက်ပျက် ၀တ်ထားတဲ့ကိုပိုင် က ကျွန်တော့်မျက်လုံးထဲတွင်တော့ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး။
` မအိပ်သေးပါဘူးဗျာ…မိုးအေးအေးမှာ အိပ်ပစ်ရမှာနှမြောတယ်။´
` မင်းက မအိပ်ပစ်ဘဲ နှမြောရအောင် ဘာလုပ်ချင်လဲ´
` အသေသတ်ပစ်လိုက်…မပြောဘူး´ အရင်က ကိုပိုင့်ကို ဒီလိုစကားမျိုးတွေကျွန်တော်မပြောထွက်ပါ။ ခုမှ…ကျွန်တော့်ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေသည်။ ကိုပိုင့် ထိုင်ခုံဘေးတွင် မတ်တပ်ရပ်ပြီးစကားပြောရသည်မှာ ကိုပိုင့် ရဲ့ ကိုင်သင်းရနံ့ကိုရသည်။ ရေချိုးပြီးပြီးချင်းပေမယ့် ဆပ်ပြာနံ့သက်သက်ကို မရဘဲ ကိုပိုင့်ရဲ့ တခုတည်းသော ကိုယ်ပိုင် (ကိုပိုင် မဟုတ်ပါ) ရနံ့ကိုရသည်။ ပြောရရင် ယောကျာ်းဆန်ဆန် ကိုယ်နံ့။ (ချိုင်း အောက်က အနံ့ မဟုတ်ပါ။ ဟီး။)
` မင်းမထိုင်ဘဲ ဘာလုပ်နေတာလဲ…´
` ကိုပိုင်မှ ဟိုဘက်မတိုးပေးတာ´ ကိုပိုင် က ဘာမှဆက်မပြောတော့ဘဲ..ဖင်ကို ဟိုဖက်ကိုရွေ့ထိုင်လိုက်သည်။ ကျွန်တော်က သူ့နေရာကို ထိုင်ချလိုက်တော့ ဗြုန်းခနဲ ကျွန်တော့် ဘက်ကို ပြန်ရွေ့လာသည်။ ကိုပိုင့်ရဲ့ ပေါင်ပေါ်မှာ ကျွန်တော် ထိုင်ဖြစ်သွားသည်။
`ဟာ…´ ကျွန်တော် ချက်ချင်း ထမယ်လုပ်တော့ ကိုပိုင်က ကျွန်တော့်ခါးကို သူ့လက်ကြီးတွေနဲ့ အားရပါးရ ဖက်ထားသည်။ ကိုပိုင် ဒီညဘာတွေဖြစ်တောလဲ။
`ကိုပိုင်…´ ကျွန်တော့် ကိုပိုင့်ရဲ့လက်တွေကို အားနှင့်ဆွဲဖြုတ်သည်။ ကိုပိုင့်ရဲ့ ပေါင်က အနွေးဓာတ်က
`မင်းကို ဖက်ရတာ ငါ့မိန်းမ ဖက်ရတာထက်ကောင်းတယ်… အသားက ပျော့အိအိလေး..´ ပြောပြီးတာနဲ့ ကိုပိုင်က လက်တွေကိုဖြုတ်ပေးသည်။ ကိုပိုင်ဘာသဘောနဲ့ ခုလိုလုပ်မှန်းကျွန်တော်မသိ။ သိတာ တစ်ခုက ကျွန်တော်ရင်တွေခုန်နေမိသည်။ ကျွန်တော် ကိုပိုင့် ပေါင်ပေါ်က မထချင်ပေမယ့် ထလိုက်ရသည်။
` ကျွန်တော်မပျော့ဘူး…မာတောင်နေတာပဲ…စမ်းကြည့်မလား…´ ညစ်တစ်တစ် စကားလုံးတွေကို ရွေးသုံးမိ၏။
` ကဝေ တို့များ…တနေ့တနေ့ ဒါပဲတောင့်တနေတယ်…´ ကိုပိုင့်ရဲ့ အကြည့်တွေက ရီဝေနေသည်။ မျက်ထောင့်မှာ နီရဲနေတဲ့ ကိုပိုင့်မျက်ဝန်းတွေက ကျွန်တော့်ရင်တွေကို ပိုခုန်စေတာလား။
` တော်ပြီ…ကိုပိုင်..တညနေလုံး ကျွန်တော့်ကို ဒါတွေပဲပြောနေတယ်….ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်…´
` မင်းကို ပေးပြန်လို့လား…´
` ပေးမပြန်တော့ ကျွန်တော်က ဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲ…´ ကိုပိုင့်ရဲ့ ကိုယ်သင်းရနံ့အောက်မှာ ကျွန်တော် နစ်မြောသွားသည်။ ကျယ်ဝန်းတဲ့ ပုခုံးတွေနဲ့ လက်မောင်းကြွက်သားတွေက ခေါင်းမှီပြီး အိပ်ချင်စရာ။
` ငါ…ခု…ဖိုးခွားလေး ကိုအရမ်းသတိရတယ်….မပြန်ပါနဲ့ကွာ…ငါနဲ့အဖော်လုပ်ပေး…´ ဖိုးခွားလေး က ကိုပိုင့် ရဲ့အချစ်ဆုံးတင်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်လည်း ဖိုးခွားလေးကို အရမ်းချစ်သည်။
`ဒီတိုင်းတော့ မနေချင်ပါဘူး…စားစရာတစ်ခုခုလုပ်…ဒါမှ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း စားလိုက်..မပျင်းတော့ဘူး..´ ကိုပိုင့်မျက်ဝန်းတွေက တောက်ပသွား သလိုပင်။
` ငါက အစားထက် သောက် တာမင်းလည်းသိသားနဲ့…စားစရာမရှိဘူးကွ…ဒီလိုလုပ်…အိမ်နားက ဆိုင်မှာ…အကြော်တွေသွားဝယ်…အာလူးကြော်တို့…ဆိတ်သားခြောက်တို့…နောက်…မင်းကြိုက်တဲ့ အအေးသွားဝယ်…ငါဒီမှာ…ငါသောက်ဖို့ပြင်ထားမယ်….´ ကျွန်တော် မှားတာပါ။ ကိုပိုင့်ရဲ့ အရက်သောက်ချင်စိတ်တွေကို သွားပြီး သတိပေးသလိုဖြစ်သွားသည်။ ခု…မမိုးနဲ့ အဆင်မပြေတာရော..ဖိုးခွားလေးကို သတိရတာရော..ပျင်းတာရော…အရာအားလုံးပေါင်းပြီး သောက်လို့ကတော့…ဟူး…မလွယ်။
` တော်ပြီ…မစားတော့ဘူး…ကိုပိုင်က သောက်ဖို့ချောင်းနေတာ…မမိုးလည်းမရှိဘူး..မသောက်နဲ့တော့´
ကိုပိုင် ထိုင်ရာက ထသွားသည်။ စကားတခွန်းမှပြန်မပြော။ ကိုပိုင့် စိတ်ဓာတ်က… သာမာန်လူတယောက် နားလည်ရန်ခက်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုး။ ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ဘဲ TV ကိုသာစိုက်ကြည့်နေသည်။ မိုးအေးအေးမှာ တယောက်တည်းနေရတာနှင့်စာရင် ကိုပိုင့် အိမ်မှာနေရတာ ပိုပြီး လုံခြုံသည်ဟုခံစားရသည်။ ခြေသံကြားရာ လှည့်ကြည့် လိုက်တော့ ကိုပိုင် ထွက်လာသည်။ လက်ထဲတွင် တစ်ထောင်တန် ၃ ရွက်..။ ကျွန်တော့်လက်ထဲ ထည့်ပေးပြီး..
`သွား…အောက်မှာ အကြော်နဲ့…ငါခုနက ပြောတာတွေသွားဝယ်…´
` မင်းမစားလည်း ငါစားမှာပေါ့..´ ကိုပိုင့်ရဲ့ လေသံက ခါတိုင်းလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးမရှိ။ ခုဒီဟာက စိတ်ညစ်လို့အရက်သောက်တာလား။ ဘာလို့ ယောကျာ်းတိုင်းက စိတ်ညစ်ရင် အရက် သောက်တတ်ရတာလဲ။ ဂေးတွေ ကော စိတ်ညစ်ရင် ဘာလုပ်ကြလဲ။ (သိုးငယ် သိချင်၏)။ ကိုပိုင်ပေးတဲ့ ပိုက်ဆံကို ယူပြီး အောက်ဆင်းလာခဲ့သည်။ လှေခါးအောက် ရောက်မှ ထီးမယူခဲ့မှန်းသိသည်။ အိမ်နားဆိုပေမယ့် ၃ မိနစ်လောက်တော့ လျောက်ရသည်။ မိုးက ခုနက လောက်တော့ မရွာပေမယ့် တော်တော်စိုလောက်သည်။ ကျွန်တော် အပြေးတပိုင်း လျောက်သွားသည်။ အဲ…ဒီနေ့ဆိုင်က ဘာလို့ အစောကြီးပိတ်တာလဲ။ ကျွန်တော်တို့လမ်းထိပ်တွင်တော့ mini-market တခုရှိသည်။ ဒီမိုးနဲ့ လမ်းထိပ်သွားပြီး ပြန်လို့ကတော့ တကိုယ်လုံးစိုရွဲမှာသေချာသည်။ မိုးစက်တွေရဲ့ တပေါက်ပေါက်ကိုယ်ပေါ်ကိုကျသည့်အခါ အေးစက်မှုနှင့်အတူ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ရင်တွေခုန်နေသည်။ mini-market ထဲရောက်တော့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်က ရေတွေက တတောက်တောက်နှင့်။ ဘောင်းဘီတိုနှင့်မို့တော်သေးသည်။ ဆိုင်ထဲက ၀န်းထမ်းမလေးတွေက ကျွန်တော့်ကို အထူးအဆန်းသတ္တ၀ါ တစ်ကောင်ကို မြင်ရသလို ကြည့်နေသည်။ သူတို့တွေကို ပြန်မကြည့်တော့ဘဲ ကိုယ်လိုချင်တာကို ပဲ အမြန်ယူပြီး ငွေရှင်းလိုက်သည်။
` ဟက်…ဟက်ချိုး…´ ကျွန်တော်နှာခေါင်းကို လက်နဲ့အုပ်ပြီး နှာချေလိုက်ပေမယ့် အသံတော်တော်ကျယ်သွားသည်ထင်။ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ အကြည့်တွေအားလုံးက ကျွန်တော့်ဆီ ရောက်လာသည်။
` အကို…ဆေးပါ..တစ်ခါတည်းဝယ်သွားမလား…´ ကျွန်တော့်မုန့်ထုပ်တွေကိုလှမ်းပေးရင်း ကောင်မလေးက ကျွန်တော့်ကို လှမ်းမေးသည်။
` ဘာဆေးဝယ်ရမှာလဲ…´ ကျွန်တော် တခါတလေ အခု လိုအူကြောင်ကြောင်နိုင်ပါသည်။
` အင်း…ရတယ်….မယူတော့ဘူး…ကျေးဇူးပဲ´ ကောင်မလေး က ကျွန်တော့်ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ပြုံးပြသည်။ ကျွန်တော့်ထက် အသက်သိပ်ကွာမယ့်ပုံမပေါ်။ ဆံပင်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး ချည်ထားသည်။
` နောက်…မိုးရွာရင် ထီးဆောင်းနော်…´ ကောင်မလေးက တကယ့်ကို ဂရုစိုက်ပြနေသည်။ ကျွန်တော့်နေရာ မှာ straight တယောက်သာဆိုရင်…ဒီကောင်မလေးကို တမျိုးထင်သွားနိုင်သည်။
` ရပါတယ်ရှင့်…´ ကောင်မလေးကတော်တော့်ကို ချစ်ဖို့ကောင်းသည်။ မျက်နှာမှာ ဘာမှမချယ် ထား။
ပကတိ ၀ါညက်ညက်ခပ်သွယ်သွယ် မျက်နှာလေးမှာ သနပ်ခါး ပါးပါးလေးလူးထားသည်။ ပါးကွက်တောင် မကွက်ထား။
` ဟုတ်ကဲ့…´ ကောင်မလေးရဲ့အကြည့်က ကျွန်တော့်လို ဂေးတယောက်ကိုတောင် ရင်ခုန်စေသည်ဆို ရင်….။ ခုမှ မိုးက ပိုကြီးလာသည်ထင်။ မိုးစက်တွေရဲ့ အရှိန်က ပိုပြီး ပြင်းထန်လာသည်။ ဒါ…ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် မိုးရေထဲ လမ်းလျောက်ခြင်း။ ကိုပိုင်သာ ကျွန်တော့် အိမ်နီးနားချင်း မဟုတ်ဘူးဆိုရင်…ဒီလိုညမျိုးမှာ ကျွန်တော်…အထီးကျန်ဆန်ပြီး သေသွားနိုင်သည်။ မိုးရေထဲမှာ တချက်တချက် တိုက်လိုက်တဲ့ လေက အားပြင်းလွန်းသည်။ မိုးရေတွေကြောင့်လားမသိ။ ကျွန်တော်စီးထားတဲ့ ဖိနပ်က လမ်းလျောက်ရင် နောက်မှာ ကျွတ်ကျွတ်ကျန်ခဲ့သည်။ မိုးတွင်းစီး ဖိနပ်ကောင်းကောင်းတရံ ၀ယ်ရအုံးမည်။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေကျိန်းစပ်သွားအောင် အရှေ့က မော်တောင်ကား မီးရောင်က ပြင်းလွန်းသည်။ ကျွန်တော် ဘေးကပ်ပေးလိုက်ပေမယ့် ကျွန်တော့်ဘေးနားရောက်တော့ အရှိန်ကိုလျော့လိုက်ပြီး
` မင်းသေချင်ပေမယ့်…ငါ …ထောင်ထမင်းမစားချင်ဘူးကွ….´
` ဟ….´ ကျွန်တော့်အတွေးနဲ့ကျွန်တော်ပေမယ့် လမ်းဖယ်ပေးခဲ့တာပဲ။ ကျွန်တော် ဟ ဆိုတဲ့စကား တလုံးကလွဲလို့ ဘာမှပြောမထွက်။ အလကားသက်သက်မဲ့ ပြောခံရသည်။ ဘာလို့လူတွေက ဒီလောက်ထိ ကိုယ်ချင်းစာတရား ကင်းမဲ့ရတာလဲ။ ကိုပိုင် ခဏခဏ ပြောဖူးသည်။ (ကဝေ…မင်းရဲ့စိတ်အတိုင်းလူတိုင်းကို မနှိုင်းနဲ့..လူတိုင်းက မင်းလိုစိတ်ဓာတ်ရှိနေရင်..လူတိုင်းက ကဝေ ဖြစ်နေမှာပေါ့…) ။ ကိုပိုင်ပြောတာလဲ ဟုတ်သည်။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ထဲက ပေတံ အတိုင်း လူတိုင်းကိုလိုက်တိုင်းနေသည်။ ခုနက ကြည်နူးနေတဲ့စိတ်တွေ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိ။
ကျွန်တော် လှေကားအောက်လည်းရောက်ရော…လျှပ်စစ်မီးက ဖျတ်ခနဲပြတ်သွားသည်။
ရိုက်ခံရပါများလို့ အရေပြားထုံနေတဲ့ ကလေးတယောက်လို ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက လူတွေလည်း မီးပြတ်တာလောက် တော့ ထုံနေပါပြီ။ လှေကားဘောင်ကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းကိုင်ပြီး တတ်သွားလိုက်သည်။
` ၀ုန်း….ဒုံး..…´ အိမ်ပေါ်ရောက်ခါနီး လှေကား ထစ် သုံး ..လေး ထစ်လောက်ပဲလိုမည်ထင်။
ပလတ်စတစ်လို အရာတခုကို နင်းမိပြီး ကျွန်တော် မှောက်ရက် လှေကားကနေ တရွတ်တိုက်ချောကျသွားသည်။ တော်သေးသည် မိရာကို ကျွန်တော်လှမ်းကိုင်လိုက်သည်။ ခြေသလုံးက ညိုတကြီး (စာလုံးပေါင်းသည်းခံပါ) ကို လှေကားစောင်းနဲ့ ပွတ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားသည်။
Refrence: သိုးငယ်ရေးသားသောစာများကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်ဆိုသူများအတွက် ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ သိုးငယ်ရေးသားသော အသစ်စက်စက်ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ…။
Posted by Alex Aung at 7:15 PM 1 comment: